သုံးသပ်ချက် - သကြားစွဲခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေ
သုံးသပ်ချက် - သကြားစွဲခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၈)
မှတ်ချက်များ - ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်အရေးကြီးသောစွဲလမ်းမှုသဘောတရားများနှင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဓိကအချက် ၂ ချက် - သကြားကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေးသောအခါ -
သူတို့မူးယစ်ဆေး addictive မယ်လို့တူသောကြောင့်လောင် (1) ကြွက်,
တစ်ဦးတည်းသကြားနှင့်အတူသက်သေအထောက်အထားအလွန်အကျွံနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုလောင်တဲ့အခါမှာဒီသဘာဝကစစ်ကူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပါတယ်။ Bing နှင့် abstinence ၏ဤပုံစံအများအပြားစွဲအဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှုနဲ့အပြိုင်။ တဦးတည်းစွဲဖြစ်လာဖို့နေ့တိုင်း, porn ကိုသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်သကြားစားသုံးရန်မရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့အရင်ကတောင်းသည်အတိုင်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိုကဲ့သို့သောသကြားကိုရေအဖြစ်, အစားအစာထက်အကျိုးကို circuit ကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအသိထဲမှာစွဲလမ်းကြောင်းရှင်းပါတယ်။
FULL ဆန်းစစ်ချက်: သကြားစွဲလမ်းသည်အထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အပြုအမူနှင့် Neurochemical အကျိုးသက်ရောက်မှု
neuroscience Biobehav ဗျာစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2009 ဇန်နဝါရီ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
neuroscience Biobehav ဗျာ 2008; 32 (1): 20-39 ။
နီကိုးလ်အမ် Avena, Pedro Radaနှင့် Bartley G. အ Hoebel*
အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲမေးခွန်းတစ်ခုကိုသကြားစွဲလမ်းတဲ့သဘာဝအပုံစံကိုမှအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ခဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေမဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ရန်ပြောင်းလဲကြောင်းဦးနှောက်လမ်းကြောင်းကိုလည်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated ကြောင့် "အစားအသောက်စွဲလမ်း" ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်။ သကြား opioids နှင့် dopamine ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အရှင်စွဲလမ်းအလားအလာရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်သကြားမှီခို၏အထောက်အထားများကိုအကျဉ်းချုပ်။ စွဲလမ်းလေးခုအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ "Bing", "ရုပ်သိမ်းရေး", "တဏှာ" နဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive တစ်ခုချင်းစီကိုလည်ပတ်အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်နှင့်စစ်ကူအဖြစ်သကြား Bing နှင့်အတူအပြုအမူသရုပ်ပြနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေထို့နောက်ကိုလည်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောဦးနှောက်ထဲမှာ neurochemical အပြောင်းအလဲများမှဆက်စပ်နေပါတယ်။ အာရုံကြောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ပြောင်းလဲမှုများနှင့် opioid အဲဒီ receptor binding, enkephalin mRNA စကားရပ်နှင့် dopamine နဲ့ acetylcholine လွှတ်ပေးရန်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်ကိုမှီခိုဖွစျလာနိုငျသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအစာစားခြင်းအပေါ်စာပေအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်ဤသည်အချို့သောလူ့အခြေအနေများဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မည်။
keywords: မူးရူးစား, dopamine, acetylcholine, opioid, နျူကလိယ accumbens, ရုပ်သိမ်းရေး, တဏှာ, အမူအကျင့် sensitive ကကြွက်
1 ။ ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်
forage နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ဖို့ပြောင်းလဲကြောင်းအာရုံကြောစနစ်များလည်းမူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့် Self-အုပ်ချုပ်မှုအခြေခံ။ ဒီဆေးတွေအချို့စွဲစေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတချို့အစားအစာကိုလည်း addcition စေခြင်းငှါ၎င်းယုတ္တိဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ လူအတော်များများဟာသူတို့အနေနဲ့အရက်ကိုမသောက်ရန်မဖြစ်မနေခံစားရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှအချို့သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆင်တူချိုမြိန်အစားအစာများကိုစားရန်မဖြစ်မနေခံစားရကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သတချို့လူတွေကအခက်အခဲထိုကဲ့သို့သောချိုမြိန်အဖျော်ယမကာအဖြစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ, သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုစိစစ်ပြီအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ကြွက်များပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian-မောင်းနှင်တက်ကြွကာလသို့ 12 ဇ၏နှောင့်နှေးပြီးနောက်, သူတို့တစ်တွေသကြားဖြေရှင်းချက်နဲ့ Chow မှ 4-ဇ access ကိုပေးသည်နေကြတယ်, 12 ဇနေ့စဉ်ဆုံးရှုံးအစားအစာဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ကပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တိုင်းရရှိနိုင်ဖြစ်လာအထူးသဖြင့်အခါ, ဖောဖောသီသီသကြားဖြေရှင်းချက်ကိုသောက်သင်ယူကြသည်။
ဒီပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း-နို့တိုက်ကျွေးရေးအချိန်ဇယားအပေါ်တစ်ဦးတစ်လပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအလားတူအပြုအမူတစ်ခုစီးရီးပြသပါ။ ဤရွေ့ကားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါ (လက္ခဏာအားဖြင့်ညွှန်ပြ opiate-ကဲ့သို့ "ရုပ်သိမ်းရေး" စားသုံးမှု၏ထူးထူးခြားခြားကြီးမားအကြိမ်ကြိမ်အဓိပ်ပာယျ, "Bing" အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်Colantuoni et al ။ , 2001, 2002တိုးမြှင့်သကြားအဘို့တုံ့ပြန်အဖြစ်သကြား abstinence စဉ်အတွင်းတိုင်းတာ), နှင့် "တဏှာ" (Avena et al ။ , 2005) ။ locomotor နဲ့သကြားထံမှအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှသူတွေရဲ့စားသောက် "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" နှစ်ဦးစလုံး၏အရိပ်လက္ခဏာ (လည်းရှိပါတယ်Avena et al ။ , 2004, Avena နှင့် Hoebel, 2003b) ။ သည်အခြားဓါတ်ခွဲခန်း (ထံမှသက်သေအထောက်အထား supporting နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့ဘုံများမှာဤအပြုအမူကိုတွေ့တော်မူပြီးမှGosnell, 2005, Grimm et al ။ , 2005, Wideman et al ။ , 2005ဒီဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်), လာမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကလူသိများတဲ့ဝိသေသတို့သည်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတိုး (DA) ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည် (NAc) (ဖြစ်ပါတယ်di Chiara နှင့် Imperato, 1988, ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1995) ။ အလွဲသုံးစားမှုအများစုတ္ထုများ (၏ဂန္အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့, သကြားဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအတူကြွက်ဟာ NAc အတွက် DA တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဖြန့်ချိမယ့်မူးရူး-နညျးတူမသောက်ရလိမ့်မည်ဟုကျနော်တို့ရှာတွေ့Avena et al ။ , 2006, Rada et al ။ , 2005b) ။ ဤသည်အကျိုးဆက် (DA receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှဦးဆောင်Colantuoni et al ။ , 2001, Spangler et al ။ , 2004).
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်းဦးနှောက်ထဲမှာ opioids လမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော accumbens အတွက်လျော့နည်းသွား enkephalin mRNA စကားရပ်အဖြစ် opioid စနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများ (ရှိပါတယ်Spangler et al ။ , 2004) ။ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရုပ်သိမ်းရေးအတွက် opioid ရန် naloxone နှင့်အတူရယူနိုင်ပါတယ်ကတည်းက opioid ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အကြီးအကျယ်ကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့လည်းအတည်မပြုရသေးသော opiate ကဲ့သို့ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များ (Avena, Bocarsly, Rada ကင်မ်နှင့် Hoebel, precipitate ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်, Colantuoni et al ။ , 2002) ။ ဤသည်ဆုတ်ခွာပြည်နယ်ကအနည်းဆုံးနှစ်ခု neurochemical သရုပ်ပါဝငျသညျ။ ပထမဦးဆုံး accumbens အတွက် extracellular DA အတွက်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပြီး, ဒုတိယ accumbens interneurons ထံမှ acetylcholine များလွှတ်ပေးရေး (ACH) ဖြစ်ပါသည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုမှတုန့်ပြန်တွင်ဤ neurochemical အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် opiates ၏သက်ရောက်မှုတု။
သီအိုရီသကြားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံစားသုံးမှု dopaminergic, cholinergic နှင့်ပြင်းအားအတွက်သေးငယ်ဆိုသော်ငြား psychostimulants နှင့် opiates အလားတူဖြစ်ကြောင်း opioid သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ neurochemical အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုပျော့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်, မှီခို (Hoebel et al ။ , 1999, Leibowitz နှင့် Hoebel, 2004, Rada et al ။ , 2005a) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလေ့လာမှုများ compiles နှင့်မေးခွန်းကိုဖြေဖို့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, လက်တွေ့အကောင့်များနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ်သုံးပြီးအခြားသူများရရှိသောဆက်စပ်ရလဒ်များကိုပေါင်းစပ်: သကြား, အချို့သောအခြေအနေများအတွက်, "စွဲလမ်း" ဖြစ်နိုင်သလဲ
2 ။ defining စွဲ
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တစ်လောကလုံးသဘောတူညီချက်မရှိထားတဲ့အတှကျအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူအများအပြားဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။ စွဲသုတေသနအစဉ်အလာထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်, ကင်း, နီကိုတင်းနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အာရုံစိုက်။ သို့သော်မကြာသေးမီကလောင်းကစားဝိုင်း, လိင်, ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအပါအဝင် Non-မူးယစ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းများ, ရန် "စှဲ" အမျိုးမျိုး, အစားအစာ, (စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီBancroft နှင့် Vukadinovic, 2004, လာ et al ။ , 2001, Petri, 2006) ။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "စွဲ" စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းနှင့်အရှင်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်သိမြင်မှုပြဿနာဖြစ်ပါသည်, မပေးရုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ။ "စွဲ" ကိုမကြာခဏ (ထိုဝေါဟာရကို "မှီခို" နဲ့ပြောရလျှင်ကိုအသုံးပြုသည်နယ်လ်ဆင် et al ။ , 1982) DSM-IV-TR (နေဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ်American Psychiatric Association, 2000) ။ ကျနော်တို့က၎င်း၏က၎င်း၏အဓိကအဆင့် (တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မော်ဒယ်လူ့မူးယစ်ဆေးစွဲတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတစ်ဘက်ထရီ၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်အဓိပ္ပာယ် All-လွှမ်းခြုံအတွက်အသုံးအနှုန်းမှီခိုသုံးပါလိမ့်မယ်Koob နှင့် Le Moal, 2005).
မူးယစ်ဆေးမှီခိုသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အထပ်ထပ် access ကိုအတူပြင်းထန်လာကြောင်း, compulsive တခါတရံမထိန်းချုပ်အပြုအမူတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ မှီခိုဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခိုငျသရုပ်ပြရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့စံတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. အကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုလေ့လာနေဘို့ကြွက်များနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်သကြားမှီခို၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုစမ်းသပ်ဖို့သူတို့ကိုအဆင်ပြေအောင်ခဲ့မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။
စွဲလမ်းများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံသုံးခုအဆင့်သို့အုပ်စုဖွဲ့နိုင်ပါတယ် (American Psychiatric Association, 2000, Koob နှင့် Le Moal, 1997) ။ ပထမဦးဆုံး, Bing, များသောအားဖြင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် abstinence သို့မဟုတ်အတင်းအကြပ်ဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ကာလပြီးနောက်တစ်ကြိမ်စားသုံးမှု၏မြင့်မားသောအချိုးအစားနှင့်အတူစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ Bing ၏ပုံစံအတွက် Enhanced စားသုံးမှုက၎င်း၏ထပ်ခါတလဲလဲပေးပို့နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာ၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများထိခိုက်မခံတဲ့နဲ့သည်းခံစိတ်နှစ်ဦးစလုံးထံမှဖြစ်ပေါ်စေမည်။ အသိအောက်ပါ သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော, တစ်ဦးထပ်တလဲလဲတင်ပြလှုံ့ဆော်မှုမှတုန့်ပြန်တစ်ခုတိုးလာသည်။ သည်းခံနေခြင်း (ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုပြီးတူညီသက်ရောက်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့, တုန့်ပြန်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားဖြစ်ပါသည်McSweeney et al ။ , 2005) ။ နှစ်ဦးစလုံးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အစွမ်းထက်စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ထင်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စားသုံးမှု (လို့ရပါတယ်ကတည်းကစွဲသံသရာ၏အစအဦးမှာအရေးကြီးသောဖြစ်ကြ၏Koob နှင့် Le Moal, 2005).
အဆိုပါနှိပ်စက်ပစ္စည်းဥစ္စာမရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒပိတ်ဆို့မရှိတော့အခါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသိသာဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့ (ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည့်, opiate ဆုတ်ခွာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆုတ်ခွာဆွေးနွေးကြမည်မာတင် et al ။ , 1963, လမ်း et al ။ , 1969) ။ စိုးရိမ်စိတ်စစ်ဆင်ရေး (စိုးရိမ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဝင်္များ၏ပွင့်လင်းလက်နက်အပေါ်အသုံးစရိတ်အချိန်ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်အရာထဲမှာ, မြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္သုံးပြီးတိရစ္ဆာန်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်တိုင်းတာနိုင်ပါသည်et al File ။ , 2004) ။ ဤစစ်ဆေးမှုကကျယ်ပြန့် (ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အတည်ပြုထားပြီးPellow et al ။ , 1985) နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် (ဖိုင်မှတ်တမ်းနှင့် Andrews က, 1991) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်အမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါလည်း (ရေကူးထွက်ပေါက်အားထုတ်မှုကိုတိုင်းတာသောအတင်းအကျပ်-ရေကူးစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ, ပေါ်မူတည်ပြီး vs. passive floating နိုင်ပါသည်Porsolt et al ။ , 1978) ။ opiate ဆုတ်ခွာလက္ခဏာ naloxone နှင့်အတူ precipitated နေကြသည်သောအခါ, opioid receptors ၏ inactivation အကြောင်းရင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တူညီတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာများ abstinence စဉ်အတွင်းကောက်ကာငင်ကာထုတ်လုပ်နေကြပြီးအခါ, တစ်ဦးကအချို့သော opioid စနစ်၏ဆွမရှိခြင်းကြောင့်ကြောင်းကို surmise နိုင်ပါတယ်။
လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်သည့်အခါစွဲ, တဏှာ၏တတိယအဆင့်က (များသောအားဖြင့်တစ်ဦး abstinence ကာလပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်Vanderschuren နှင့် Everitt, 2005, Weiss, 2005) ။ "တဏှာ" ကိုမကြာခဏလူသားတွေအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ပြင်းထန်သောဆန္ဒ (ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောသောညံ့ဖျင်းသတ်မှတ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေဆဲပညာရှိ 1988) ။ စွဲလမ်းနှင့် abstinence ၏ရလဒ်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ယင်း၏ဆက်စပ်တွေကိုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာရရှိရန်တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အဖြစ်ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမရှိခြင်း, ကြှနျုပျတို့ဟူသောဝေါဟာရကို "တဏှာ" ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ "တဏှာ" ကိုမကြာခဏအော်ပရေတာအေးစက်သုံးပြီးတိုင်းတာနိုင်သည့်အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုမှရည်ညွှန်းပါတယ်။ abstinence တိရစ္ဆာန်သိသိသာသာကိုနှိပ်ယင်း၏လီဗာကိုတိုးမြှင့်စေသည်ဆိုလျှင်, တဦးတည်းတိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှု၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်ဤယူနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါရောဂါရှာဖွေစံအပြင်, အမူအကျင့်ာင်း (မူးယစ်ဆေးမှီခိုအချို့ရှုထောင့်အခြေခံမှထင်နေသည်Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000) ။ အမူအကျင့်ာင်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ရွေ့လျားအဖြစ်တိုင်းတာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, abstinence အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စိတ်ကြွဆေး၏အထပ်ထပ်ကြိမ်ပြီးနောက်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ရောက်သည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ထိုး, (သိသိသာသာ hyperactivity ဖြစ်ပေါ်စေသည်Antelman နှင့် Caggiula, 1996, Glick et al ။ , 1986) ။ တဦးတည်းပစ္စည်းဥစ္စာမှ sensitized တိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏတစ်ခုတိုးလာ locomotor တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive, ပြသပါ။ cross-sensitive လည်း (သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူ၌ထငျရှားရှိနိုင်ပါသည်Piazza et al ။ , 1989) ။ တဦးတည်းမူးယစ်ရန် sensitized တိရစ္ဆာန်များတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမူးယစ်ဆေးများပိုမိုစားသုံးမှုကိုပြသလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ဦး "တံခါးပေါက်" အဖြစ်တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးပြုမူ။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ကြွဆေးပြပွဲမှ sensitized တိရိစ္ဆာန်များ (ကိုကင်းစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုအရှိန်Ferrario နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2007) နှင့်နီကိုတင်းဖို့ sensitized တိရိစ္ဆာန်များမဟုတ်တဲ့-sensitive တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအရက်လောင် (Blomqvist et al ။ , 1996) ။ ဒီအမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအတူတူပင်အာရုံကြော circuitry ကိုသက်ဝင်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်ဖို့ထင်နှင့်များစွာသော Clinician စွဲ (များအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအခွအေနေအဖြစ်ပြည့်စုံမူးယစ်ဆေးကကြားနေလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်ပညာရှိ 1988).
3 ။ ချိုးဖောက်မှုများနှင့်အာခေါင်အစားအစာ၏မူးယစ်ဆေးအာရုံကြောစနစ်၏ဘုံများအနက်အချို့သာလျှင်သက်ဝင်စေ
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအားဖြင့် activated ဦးနှောက် circuitry အတွက်ထပ်နေသည်စစ်ကူ (သဘာဝနှင့်အတု) ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ (အတူတူပင်အာရုံကြောစနစ်များအချို့လှုံ့ဆော်ကြောင်းအကြံပြုHoebel, 1985, ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988, ကယ်လီ et al ။ , 2002, le Magnen, 1990, Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005, ပညာရှိ 1988, 1989) ။ နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှု (နှစ်ဦးစလုံး၏အားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားဒေသများရှိပါတယ်ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988, Kalivas နှင့် Volkow, 2005, ကယ်လီ et al ။ , 2005, Koob နှင့် Le Moal, 2005, Mogenson နှင့်ယန်, 1991, ပညာရှိ 1997, Yeoman, 1995), နှင့်အများအပြား neurotransmitters အဖြစ်ဟော်မုန်း, (ထိုအခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လေ့လာခဲ့ကြပြီHarris က et al ။ , 2005, Kalivas, 2004, Leibowitz နှင့် Hoebel, 2004, Schoffelmeer et al ။ , 2001, Stein နှင့် Belluzzi, 1979) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို DA, အ opioids နှင့်ယခုအထိကျနော်တို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှု၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေ့ပြီသော neurotransmitters နေသော NAc shell ကိုအတွက် ACH, အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
3.A ။ Dopamine
ဒါဟာကောင်းစွာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြုအမူအားဖြည့် process သောဦးနှောက်၏ဧရိယာများတွင် DA-်အာရုံခံကိုသက်ဝင်မြဲမြံစွာတည်သည်။ ဤသည် (System ကိုအပ်မူးယစ်ဆေးအဘို့အပြခံခဲ့ရdi Chiara နှင့် Imperato, 1988, Radhakishun et al ။ , 1983), နှင့်မူးယစ်ဆေး Micro-ထိုးသွင်းသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ထုံမွှန်းများအတွက် (ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988, Mifsud et al ။ , 1989) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကနေ NAc ဖို့ mesolimbic DA projection မကြာခဏ (အားဖြည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုပညာရှိ Bozarth, 1984) ။ အဆိုပါ NAc အစားအစာရှာခြင်းနှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု၏, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု, လှုံ့ဆော်မှု salience နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပြောင်းလဲမှုအချက်ပြ (အပါအဝငျ "ဆုလာဘ်" ၏အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အရေးကြီးပါတယ်Bassareo နှင့် Di Chiara, 1999, Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998, Salamone, 1992, Schultz et al ။ , 1997, ပညာရှိ 1988) ။ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် VTA အတွက် DA ဆဲလ်အသေကောင်လှုံ့ဆော်သည်ဟုမဆို neurotransmitter ထိုကဲ့သို့သော enkephalin (အဖြစ် opioids အပါအဝင်ဒေသခံ Self-အုပ်ချုပ်မှုအားGlimcher et al ။ , 1984ထိုကဲ့သို့သော neurotensin ကဲ့သို့), Non-opioid peptides (Glimcher et al ။ , 1987) နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး (Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1981, Gessa et al ။ , 1985, McBride et al ။ , 1999) ။ တချို့ကစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်း (DA ဆိပ်ကမ်းမှာပြုမူet al အားပေးစရာ။ , 2004, Mifsud et al ။ , 1989, Nisell et al ။ , 1994, Westerink et al ။ , 1987, Yoshimoto et al ။ , 1992) ။ ထို့ကြောင့်ထပ်တလဲလဲ DA များလွှတ်ပေးရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သို့မဟုတ်ဤဆားကစ်ကနေတစ်ဆင့်ဆိပ်ကမ်းမှာ DA reuptake လျော့နည်းစေသည်ဟုမဆိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အစားအစာများ၏အမျိုးမျိုးဓာတ်ခွဲခန်း Chow, သကြား, saccharin နှင့်ပြောင်းဖူးရေနံ (အပါအဝင် NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်Bassareo နှင့် Di Chiara, 1997, Hajnal et al ။ , 2004, Liang et al ။ , 2006, မာကု et al ။ , 1991, Rada et al ။ , 2005b) ။ extracellular DA အတွက်မြင့်တက် (အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်အတွက်မုန့်ညက် outlast နိုင်ပါတယ်ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988) ။ ကအထပ်ထပ် access ကိုအတူ wanes ကတည်းကသို့သော် satiated တိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ဒီ DA လွှတ်ပေးရေး (အစားအစာအရေးပါတယ်လို့ပင်အခါ, အသစ်အဆန်းပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာသောBassareo နှင့် Di Chiara, 1997, Rada et al ။ , 2005b) ။ တိရစ္ဆာန်များအစားအစာဆုံးရှုံးနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားတိုက်ကျွေးသည့်အခါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခြွင်းချက်တခုကို, (ပုဒ်မ 5.C ။ ) ဖြစ်ပါတယ်။
Extracellular DA (မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာဖို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျော့နည်းစေAcquas et al ။ , 1991, Acquas နှင့် Di Chiara, 1992, Rada et al ။ , 2004, Rossetti et al ။ , 1992) ။ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့နည်း opiates ကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိများထက်ကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် DA နှင့် opioids နှစ်ဦးစလုံးကိုလွှတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဆုတ်ခွာ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ သကြားတစျခုထိုကဲ့သို့သောအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
3.B ။ Opioids
Opioid peptides အကြီးအကျယ်ကို (limbic စနစ်ကတစ်လျှောက်လုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့် forebrain များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် DA စနစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်Haber နှင့်လူး, 1995, Levine နှင့် Billington, 2004, Miller နဲ့ Pickel, 1980) ။ အဆိုပါ endogenous opioid စနစ်များ (DA စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်အားဖြည့်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအချို့ကွိုးစားအားထုBozarth နှင့်ပညာရှိ, 1986, di Chiara နှင့် Imperato, 1986, Leibowitz နှင့် Hoebel, 2004) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် opioid peptide enkephalin (ဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီးBals-Kubik et al ။ , 1989, Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1981, ကြားရှိ, 1982, Spanagel et al ။ , 1990) နှင့် DA များလွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖို့ mu နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် receptors နှစ်ဦးစလုံးကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ် (Spanagel et al ။ , 1990) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် opioid peptide ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်မော်ဖင်းအကိုက် (endogenous opioid peptides ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲPrzewlocka et al ။ , 1996, Spangler et al ။ , 2003,Turchan et al ။ , 1997) ။ Opioids အချို့ accumbens အတွက်ဂါဘမြို့သားတွေနဲ့ cotransmitters နှင့် dorsal striatal ရလဒ် (အဖြစ်ကိုလည်းဒီစနစ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းကယ်လီ et al ။ , 2005).
opiates, ဒါမှမဟုတ်ပင်အချို့ Non-opiate မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုကိုထပ်ခါတစ်လဲလဲ, အ NAc အပါအဝင်အများအပြားဒေသများ, (အတွင်း mu-opioid အဲဒီ receptor ာင်းမှုနိုင်ပါတယ်Koob et al ။ , 1992, Unterwald, 2001) ။ အဆိုပါ NAc သို့ထိုးသွင်းတစ်ဦးက mu-receptor ရန် (ဘိန်းဖြူ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု attenuate ပါလိမ့်မယ်Vaccarino et al ။ , 1985), နှင့်စနစ်များကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးအရက်နှင့်ဘိန်းဖြူမှီခို (များအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြDeas et al ။ , 2005, Foster et al ။ , 2003, မာတင်, 1975, O 'Brien, 2005, Volpicelli et al ။ , 1992).
အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမိ (က်ဘ်ဆိုက်များအမျိုးမျိုးအတွက် endogenous opioids မှတဆင့်ဆိုးကျိုးများရှိပါတယ်Dum et al ။ , 1983, မာနှင့် Holder, 1997, Tanda နှင့် Di Chiara, 1998), နှင့်အဆီသို့မဟုတ်သကြား၌ကြွယ်ဝအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏ NAc တိုးစားသုံးမှုအတွက် mu-opioid agonists ၏ဆေးထိုး (Zhang က et al ။ , 1998, Zhang ကနှင့်ကယ်လီ, 2002) ။ Opioid ရန်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ချိုမြိန်အစားအစာစားသုံးမိပါလျော့ကျခြင်းနှင့်အရေးပါတယ်လို့, နှစ်သက်သောအစားအစာများ၏အစားအစာများကိုအတိုကောက်ပင်စံ Chow စားသုံးမှုအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သောဆေးများမှာ (Glass ကို et al ။ , 1999) ။ ဤသည် opioid-အာခေါင် link ကိုနောက်ထပ် (ထိုအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု hedonic တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တစ်ဦး opioid "ကဲ့သို့" အဘို့အ dopaminergic သည့်စနစ်သို့မဟုတ် "အပျော်အပါး" စနစ်အစ dissociated သောသီအိုရီအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Berridge, 1996, Robinson နဲ့ Berridge, 1993, Stein, 1978) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် opioids hedonic တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (မော်ဖင်းအကိုက်ခံတွင်း၌မွှေးဖြေရှင်းချက်များအတွက်ကြွက် '' အပြုသဘောမျက်နှာအရသာ reactivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း data ကိုမှလာPecina နှင့် Berridge, 1995) ။ သည် "လို" နှင့် "အကြိုက်" စနစ်များအကြား dissociation လည်း (လူသားများလေ့လာမှုများအားဖြင့်အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်Finlayson et al ။ , 2007).
3.C ။ Acetylcholine
ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြား cholinergic စနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအစားအသောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခြင်း, DA နှင့် opioids (မှဆက်စပ်ပြီကယ်လီ et al ။ , 2005, Rada et al ။ , 2000, Yeoman, 1995) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် ACH interneurons အာရုံစိုက်, မော်ဖင်းအကိုက်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု (ACH လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လျော့ကျSmith က et al ။ , 1984ကအတည်ပြုခဲ့), တစ်ဦးတွေ့ရှိချက် Vivo အတွက် လွတ်လပ်စွာ-ပြုမူကြွက်များတွင် microdialysis (Fiserova et al ။ , 1999, Rada et al ။ , 1991a, 1996) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် Cholinergic interneurons ရွေးချယ် (enkephalin ဗီဇစကားရပ်နှင့် peptide လွှတ်ပေးရန် modulate စေခြင်းငှါကယ်လီ et al ။ , 2005) ။ , DA အနိမ့်နေစဉ်မော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းရေး, အ NAc အတွက် extracellular ACH တိုးစဉ်အတွင်းဒီ neurochemical ပြည်နယ်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်အကြံပြုခြင်း (Pothos et al ။ , 1991, Rada et al ။ , 1991b, 1996) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် DA လျော့ကျလာနေချိန်တွင်အလားတူ, နီကိုတင်းနှင့်အရက်ဆုတ်ခွာနှစ်ဦးစလုံး, extracellular ACH တိုးမြှင့် (de Witte et al ။ , 2003, Rada et al ။ , 2001, 2004) ။ အဆိုပါ NAc အတွက်ထိုးသွင်း M1-receptor agonists အဆိုပါအတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ်မှုများတွင်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုငျသောကွောငျ့ဤအဆုတ်ခွာပြည်နယ် (အပြုအမူစိတ်ကျရောဂါပါဝင်နိုင်Châu et al ။ , 1999) ။ မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးအတွက် ACH ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနောက်ထပ် Non-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များ precipitate နိုင်သည့်စနစ်တကျအုပ်ချုပ် acetylcholinesterase inhibitors, (နဲ့အတူသရုပ်ပြခဲ့ပြီးKatz နှင့် Valentino, 1984, Turski et al ။ , 1984).
အဆိုပါ NAc အတွက် ACH လည်းအစားအစာစားသုံးမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ခြုံငုံ muscarinic အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာရောထွေး muscarinic agonist arecholine ၏ဒေသခံဆေးထိုးနို့တိုက်ကျွေးရေးတားစီးပါလိမ့်မယ်ကတည်းက M1 receptors မှာနို့တိုက်ကျွေးမှုတားစီးဖို့ကြောင်းကို theorize, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအတော်လေးတိကျတဲ့ M1 ရန် pirenzapine (Rada နှင့် Hoebel, အတည်မပြုရသေးသော) ကပိတျဆို့ထားနိုင်ပါတယ်။ မွတ်မပြေနိုင်သောရန်အစာကျွေးပါ (NAc အတွက် extracellular ACH တိုးပွါးAvena et al ။ , 2006, မာကု et al ။ , 1992) ။ တစ်ဦးကအေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်လည်း NAc အတွက် ACH တိုးပွါးနှင့်တစ်ပြိုင်နက် DA (ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေမာကု et al ။ , 1991, 1995) ။ phentermine (fen-Phen) နဲ့ပေါင်းစပ် D-fenfluramine (စားခြင်းနှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့ဆေးထိုးမှာ NAc အတွက် extracellular ACH တိုးပွါးGlowa et al ။ , 1997, Rada နှင့် Hoebel, 2000) ။ accumbal ACH အဆိပ်အတောက်-သွေးဆောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက် (Non-lesioned ကြွက်မှဆွေမျိုး hyperphagic များမှာHajnal et al ။ , 2000).
DA / ACH ချိန်ခွင်လျှာနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောအဘို့အ hypothalamic စနစ်များအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ (PVN) တွင်ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာအစာစားခြင်းသွေးဆောင်ရသော Norepinephrine နှင့် galanin, အောက်ပိုင်း accumbens ACH (Hajnal et al ။ , 1997, Rada et al ။ , 1998) ။ ခြွင်းချက်တခုကို neuropeptide-Y ကို, အ PVN သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာအစာစားလှုံ့ရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ DA လွှတ်ပေးရေးကိုလည်းမနိမ့် ACH (တိုးမြှင့်မထားဘူးRada et al ။ , 1998) ။ သီအိုရီနှင့်အညီ, အ PVN သို့ serotonin ပေါင်း CCK ဆေးထိုး၏မွတ်မပြေနိုင်သောထုတ်လုပ်ပေါင်းစပ် (accumbens ACH တိုးပွါးပဲ့ et al ။ , 2003).
ဒါဟာ (ဒီပုံမွတ်မပြေမရဖန်တီး, ဒါပေမယ့်အစားတစ်ခုဆန္ဒရှိပြည်နယ်, DA အနိမ့်နှင့် extracellular အခါ ACH မြင့်မားသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါသည်Hoebel et al ။ , 1999), (အပြုအမူစိတ်ကျရောဂါစဉ်အတွင်းအဖြစ်Zangen et al ။ , 2001, Rada et al ။ , 2006), မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (Rada et al ။ , 1991b, 1996, 2001, 2004) နှင့် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက် (မာကု et al ။ , 1995) ။ ကျနော်တို့ (ACH post-Synaptic M1 agonist အဖြစ်ပြုမူအခါ DA မှဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကောက်ချက်ချနှင့်အရှင် dopaminergic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်တစ်ဦး 'ဘရိတ် "အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါHoebel et al ။ , 1999, Rada et al ။ , 2007) DA DA အတော်လေးနိမ့်သည်လာသောအခါမွငျ့မားနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါအခါမွတ်မပြေနိုင်သောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
4 ။ မူးယစ်ဆေးဝါး self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှုအကြားအပြုအမူအလားတူ
"သကြားစွဲလမ်း" ၏အယူအဆနှစ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကို bandied ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "သကြားစွဲလမ်း" ၏လက်တွေ့အကောင့် (ပေါ်ပြူလာအစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်များအတွက်အများကြီးရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေနှင့်အာရုံ၏ခေါင်းစဉ်ပါပြီAppleton မှာနေတဲ့အကြောင်း, 1996, DesMaisons, 2001, ကက်သရင်း, 1996, ရုဖု, 2004) ။ သူတို့သကြားကြွယ်ဝသောအစားအစာများ၏သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှုံးစေသည့်အခါဤအအကောင့်အသစ်များ၏မှာတော့လူတွေဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြရန်။ သူတို့ကအစ relapse နှင့်ထကြွလွယ်သောအစာစားဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်, အထူးသဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ချောကလက်, နဲ့သကြားအဘို့, အစားအစာတဏှာကိုဖော်ပြရန်။ ဤသည်အဝလွန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စားရောဂါဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါချိုမြိန်အစားအစာများနှင့်အတူ Self-ဆေးတစ်သံသရာစေပါတယ်။
အစားအသောက်စွဲလမ်းမီဒီယာအတွက်လူကြိုက်များခဲ့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက် neurochemistry (အပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့အဆိုပြုခဲ့သော်လည်းHoebel et al ။ , 1989, le Magnen, 1990), ဒီဖြစ်စဉ်သာမကြာသေးမီကစနစ်တကျဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ပြီ။
ပုဒ်မ 1 အတွက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျနော်တို့ပုဒ်မ2အတွက်ပေးသောအမူအကျင့်များနှင့် neurochemical commonalties များအတွက်ပုဒ်မ3နှင့်စမ်းသပ်မှုအတွက်တင်ပြကြသည်မူးယစ်ဆေးမှီခိုများအတွက်စံလျှောက်ထားထို့နောက်တစ်ဦးသကြားဖြေရှင်းချက်အပေါ်မူးရူးမှကြွက်များ induces တဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးအချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုပါ။ ကြွက်သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရက်သတ္တပတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနှင့် Chow) အတွက်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု 12 ဇအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကာ aqueous 10% sucrose ဖြေရှင်းချက် (အချို့စမ်းသပ်ချက်အတွက် 25% ဂလူးကို့စ) နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်း Chow မှ 12-ဇနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားရသည်။ ဤရွေ့ကားကြွက်ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာ libitum သကြားနှင့် Chow, ကြော်ငြာ libitum Chow, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Chow (ဓာတ်ခွဲခန်း Chow မှ 12-ဇလက်လှမ်းလိုက် 12-ဇဟာဆင်းရဲချို့တဲ့) အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ ယင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအုပျစုမြားအဘို့, ရရှိမှုပုံမှန်အားဖြင့်မှောင်မိုက်သံသရာစတင်ခြင်းမှာ ensues ထားတဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေး, လှုံ့ဆော်နိုင်ရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အတက်ကြွကာလသို့4ဇနှောင့်နှေးနေပါတယ်။ အဆိုပါ Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနှင့် Chow regimen အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြွက်အများအပြားအတိုင်းအတာအပေါ်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနဲ့တူအောင်နေတဲ့ပြည်နယ်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့် (ပုဒ်မ 4) နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့ (ပုဒ်မ 5) တူညီ neurochemical သို့ခွဲခြားထားတယ်။
4.A ။ "Bing": နေ့စဉ်သကြားစားသုံးမှု၏စက်လှေကားနဲ့ကြီးမားတဲ့အစားအစာများ
စားသုံးမှု၏တင်းမာမှုလျှော့ချအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးရဲ့ဝိသေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် (ကာနှိပ်စက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုပြီးအတူတူပျော်ရွှင်ဖွယ်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်သည်းခံစိတ်ပေါင်းစပ်, ဖြစ်နိုင်ပါသည်Koob နှင့် Le Moal, 2005), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာတိုးမြှင်အမူအကျင့်ကို Activation ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် locomotor ာင်း, (အဖြစ် sensitive ကVezina et al ။ , 1989) ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုလက်ခံရရှိဆေးထိုးတဲ့ function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားကြောင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးကြားကာလအတွက် Self-စီမံခန့်ခွဲမည်သည့်ကာလအတွင်းအများအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်နာရီအနည်းငယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ, (Gerber နဲ့ပညာရှိ, 1989) နှင့် extracellular DA တစ်ဦးအခြေခံအထက်တွင်မွှငျ့တငျ, သို့မဟုတ် NAc ထဲမှာ "ခလုတ်ပွိုင့်" (စောင့်ရှောက်မယ့်ထုံးစံ၌Ranaldi et al ။ , 1999, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1995) ။ နေ့စဉ်လက်လှမ်း၏အရှည်ပြင်းထန်စွာနောက်ဆက်တွဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူကိုထိခိုက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ access ကိုတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအား 10 ဇအခါဥပမာ, အများဆုံးကိုကင်း (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတစ်ဦး session ရဲ့ပထမဦးဆုံး6မိစဉ်အတွင်းဖြစ်ပါသည်Ahmed ကနှင့် Koob, 1998) ။ ပေါ်ထွက်လာကြောင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများ၏ပုံစံကို "compulsive" မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသူနှင့်ဆင်တူသောကွောငျ့ "Bing" ကိုဖန်တီးရန်လက်လှမ်း၏လီမိတက်ကာလ, (အသုံးဝင်သောပါပြီMarkou et al ။ , 1993, Mutschler နှင့် Miczek, 1998, O 'Brien et al ။ , 1998) ။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, န့်အသတ် access ကိုနှင့်အတူပေးထားကြသည်တောင်မှသည့်အခါလူသားများသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များထပ်တလဲလဲဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ် "Bing" ၌သူတို့ကို Self-စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည် (Bozarth နှင့်ပညာရှိ, 1985, Deneau et al ။ , 1969) ။ သို့သော်စမ်းသပ်-ချမှတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုထက် သာ. ကောင်း၏ ကြော်ငြာ libitum စမ်းသပ်ဆဲရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လက်လှမ်းကတိရစ္ဆာန်အမူးယစ်ဆေး-ရရှိမှုကာလစတင်ခြင်းမှာအနည်းဆုံးကြီးမားသောမူးရူးယူလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးဖြစ်လာကတည်းက။ ထို့အပြင်, အစားအစာကန့်သတ်နေတဲ့ကာလ (မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်Carr က, 2006, ကာရိုး, 1985) နှင့် (အ mesoaccumbens DA စနစ်အစားထိုး neruoadaptations ထုတ်လုပ်ပြသထားသည်ပန် et al ။ , 2006).
သကြားနှင့်အတူအမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားဆင်တူသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦး "မူးရူး" အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့သကြားစားသုံးမှုမြင့်လာခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်၏ပထမတစ်နာရီအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနဲ့ Chow နေ့စဉ်တိုက်ကျွေးကြွက်, (Colantuoni et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ ကြော်ငြာ libitum တစ်သကြားဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသူတို့မလှုပ်ရှားကာလအပါအဝင်နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကိုသူတို့ခြုံငုံစားသုံးမှုတိုးမြှင့်ပေမယ့်ကန့်သတ်-access ကိုတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ် 12 ဇထဲမှာရှိသကဲ့သို့အများကြီးတွင်းသကြားဓာတ်လောင် ကြော်ငြာ libitum-fed တိရိစ္ဆာန်များ 24 ဇအတွက်လုပ်ပါ။ အော်ပရေတာအေးစက် (fixed-အချိုး 1) ကို အသုံးပြု. အသေးစိတ်မုန့်ညက်ပုံစံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကန့်သတ်တိရိစ္ဆာန်များသကြားသောက်သုံးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, access ကိုကာလတလျှောက်လုံး access ကိုစတင်ခြင်းမှာသကြားတစ်ဦးကြီးများသည်ဘောဇဉ်တို့ကိုလောင်ပါနှင့်ပိုကြီးတဲ့သကြားနည်းပါးလာအစားအစာများကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ ကြော်ငြာ libitum (သဖန်းသီး။ 1; အတည်မပြုရသေးသော Avena နှင့် Hoebel,) ။ ကြွက်, အတည်မပြုရသေးသော, Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနှင့် Chow ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (Avena, Bocarsly, Rada ကင်မ်နှင့် Hoebel မှုအရာသကြားထံမှရရှိသောအပိုကယ်လိုရီများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်၎င်းတို့၏ Chow စားသုံးမှုလျော့ကျလာခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ကယ်လိုရီစားသုံးမှု, ထိန်းညှိတိုက်ကျွေး Avena et al ။ , 2003b, Colantuoni et al ။ , 2002).
အော်ပရေတာအခန်းများနေထိုင်နှစ်ခုကိုယ်စားလှယ်ကြွက်များ၏အစာစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow (အနက်ရောင်လိုင်း) ရက်နေ့တွင်ထိန်းသိမ်းထားတဦးတည်းပေးသောကြော်ငြာ libitum Sucrose နှင့် Chow (မီးခိုးရောင်လိုင်း) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သကြားတစ်ဦးတိုးလာစားသုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နာရီ0ဖြစ်ပါတယ်4...
4.B ။ "Withdrawal": ပူပန်ကာ opioid-ရန်သို့မဟုတ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူစိတ်ကျရောဂါ
ပုဒ်မ2ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖယ်ရှားသည်, သို့မဟုတ်သင့်လျော်သော Synaptic အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့သောအခါ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက် opiate ဆုတ်ခွာလက္ခဏာကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု opioid ရန် (opiate မှီခို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဆုတ်ခွာ precipitate ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Espejo et al ။ , 1994, Koob et al ။ , 1992) ။ ကြွက်များတွင် opiate ဆုတ်ခွာ (ပြင်းထန် somatic ဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်မာတင် et al ။ , 1963, လမ်း et al ။ , 1969), (ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်လျော့ကျAry et al ။ , 1976), ကျူးကျော် (Kantak နှင့် Miczek, 1986), နှင့်စိုးရိမ်စိတ် (Schulteis et al ။ , 1998), အဖြစ် dysphoria နှင့်စိတ်ကျရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုစိတ်ခွန်အားနိုး syndrome ရောဂါ (de Vries နှင့် Shippenberg, 2002, Koob နှင့် Le Moal, 1997).
opioid ဆုတ်ခွာ၏ဤနိမိတ်လက္ခဏာဆုတ်ခွာတစ်ခု opioid ရန်နှင့်အတူ precipitated အခါသကြားမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအပြီးမှတ်ချက်ချခဲ့ကြ, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်နှင့်သကြားကိုဖယ်ရှားကြသောအခါ။ (3 / ကီလိုဂရမ်, SC mg) ကို opioid ရန် naloxone တစ်အတော်လေးမြင့်မားသောထိုးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ, ထိုကဲ့သို့သောသွားများစကားများသော, forepaw တုန်ခါနှင့်ဦးခေါင်းကိုလှုပ်အဖြစ်ဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များ, (ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်Colantuoni et al ။ , 2002) ။ တစ်ဦးမွငျ့မားသောပေါင်း-ဝင်္ (များ၏ထိတွေ့လက်မောင်းပေါ်ကုန်လျှော့အချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဤအတိရိစ္ဆာန်များလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်Colantuoni et al ။ , 2002()သဖန်းသီး။ 2).
အချိန်တစ်ခုမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္များ၏ပွင့်လင်းလက်နက်အပေါ်ခဲ့ရသည်။ ကြွက်လေးအုပ်စုများတစ်လအဘို့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာအစားအစာအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ naloxone (3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ The Daily ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဂလူးကို့နှင့် Chow အုပ်စုကိုဖွင့်လက်နက်အပေါ်လျော့နည်းအချိန်ကုန် ...
အမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါလည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား-ကျွေးမွေးကြွက်များတွင် naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြွက်များ (ရေကူးခြင်းနှင့်တောင်တက်) မှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ကနဦး 5-မိအတင်းအဓမ္မ-ရေကူးစမ်းသပ်ပေးခဲ့နှင့် passive (floating) အပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါကြွက် 21 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြော်ငြာ libitum Sucrose နှင့် Chow, ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငြာ libitum Chow နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow, Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Chow, ကျွေးမွေးခဲ့လေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက် 22 တွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း-အောင်ကျွေးကြွက်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့သကြားနှင့် / သို့မဟုတ် Chow ခံယူမယ်လို့အချိန်တွင်အပေါင်းတို့, ကြွက်အစားဆုတ်ခွာ precipitate မှ naloxone (3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) နဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ကြပြီးတော့အဘို့အပြန်ရေ၌ထားကြ၏ အခြားစမ်းသပ်မှု။ အောင်ကျွေးနေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow ခဲ့သောအုပ်စု, လွတ်မြောက်ရန်အပြုအမူတွေကိုသိသိသာသာကြော်ငြာ libitum Sucrose နှင့် Chow နှင့်ကြော်ငြာ libitum Chow ထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်နှိမ်နင်းခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3; ကင် Avena နှင့် Hoebel, အတည်မပြုရသေးသော) ။ passive ရေပေါ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ထွက်ပေါက်အားထုတ်မှု၌ဤကျဆင်းခြင်းဟာကြွက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကအမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါကြုံနေရခဲ့ကြသည်အကြံပြုထားသည်။
Daily Intermittent Sucrose နှင့် Chow တွင်ထိန်းသိမ်းထားသောကြွက်များသည် naloxone- မိုးရွာသွန်းမှုထွက်ခွာသွားစဉ်အတင်းအဓမ္မရေကူးစမ်းသပ်မှုတွင်ထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့များထက်ပိုများသည်။ * p <0.05 သည် Ad libitum Sugar နှင့် Chow နှင့် Ad libitum Chow အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ...
အားလုံးအစားအသောက် 24 ဇများအတွက်ဖယ်ရှားသောအခါ opiate-ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ နောက်တဖန်ဒီ (ထိုကဲ့သို့သောသွားများစကားများသော, forepaw တုန်ခါခြင်းနှင့်ဦးခေါင်းလှုပ်အဖြစ် somatic ဆိုင်းဘုတ်များပါဝင်သည်Colantuoni et al ။ , 2002) နှင့်တစ်ဦးမွငျ့မားသောပေါင်း-ဝင်္ (Avena, Bocarsly, Rada ကင်မ်နှင့် Hoebel, အတည်မပြုရသေးသောနှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်) ။ သကြား၏မျှသာ remove အားထံမှသဘောဆောင်သောဆုတ်ခွာသတ်မှတ်ထားအဖြစ်လျော့နည်းသွားခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို အသုံးပြု. သတင်းပို့ခဲ့ပြီး (Wideman et al ။ , 2005) ။ ဒါ့အပြင်ပြင်းထန်တဲ့အမူအကျင့်လက္ခဏာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့် (ကပါဝငျတဲ့အစားအစာ၏ဆုတ်ခွာချိန်အတွင်းတွေ့ပါပြီGalic နှင့် Persinger, 2002).
4.C ။ "တဏှာ": Enhanced abstinence အောက်ပါသကြားအဘို့တုံ့ပြန်
ပုဒ်မ2ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များမှာ "တဏှာ" (တစ်ဦးနှိပ်စက်ပစ္စည်းဥစ္စာရယူဖို့တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 2005) ။ Self-စီမံခန့်ခွဲအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏတုံ့ပြန် unrewarded အော်ပရေတာ (တုံ့ပြန်မှုမျိုးသုဉ်းရန်ဆိုလိုသည်မှာခုခံ) တွင်ဆက်လက်ရှိ, သူတို့၏ယခင်ကအချိန်နှင့်အတူကြီးထွားလာသောမူးယစ်ဆေး (ဆိုလိုသည်မှာပေါက်ဖွား) နဲ့ဆက်စပ်တွေကိုများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့် (Bienkowski et al ။ , 2004, Grimm et al ။ , 2001, lu et al ။ , 2004) ။ မူးယစ်ဆေးနောက်တဖန်မရရှိနိုင်ဖြစ်လာလျှင်ထို့အပြင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြိုတင် abstinence မှ (ဆိုလိုသည်မှာက "ဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု") သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုယူပါလိမ့်မယ် (Sinclair နှင့် Senter, 1968) ။ အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်၌ဤတိုး relapse အထောက်အကူပြုပေမည်။ "တဏှာ" ၏ပါဝါ (တိရိစ္ဆာန်များတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်အရက်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာရရှိရန်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုဖေါ်ပြခြင်းရလာဒ်များအားဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါသည်Deroche-Gamonet et al ။ , 2004, Dickinson et al ။ , 2002, Vanderschuren နှင့် Everitt, 2004) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဤနိမိတ်လက္ခဏာ (ယခင်ကအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်တဏှာ၏ Self-အစီရင်ခံစာများတိုးပွါးသောလူသားမြားသညျနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိသောသူတို့အားနှင့် relapse များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတုO 'Brien et al ။ , 1977, 1998).
ကျနော်တို့သကြားပေါ် bingeing ခဲ့ကြွက်များတွင်နေကြပြီးသကြားစားသုံးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန် "ဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု" ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့သည်အစဉ်မတိုင်မီလုပ်ခဲ့တယ်ထက်လီဗာစာနယ်ဇင်း (abstinence ၏ 12 ရက်သတ္တပတ်များပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုအတွက် 23% ပိုသကြားအဘို့ကြွက်, သကြားဖို့ 2-ဇနေ့စဉ် access ကိုအောက်ပါသဖန်းသီး။ 4; Avena et al ။ , 2005) ။ sucrose မှ 0.5-ဇနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူအုပ်စုတစ်စုအကျိုးသက်ရောက်မှုမပြခဲ့ပါဘူး။ ဤသည်ကြွက် sucrose ၏အရသာကိုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောတစ် cogent ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်တစ်ဦးဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်မယ့်ထုံးစံ၌ပြုလုပ်စားသုံးကြပြီမဟုတ်။ ရလဒ်တိုးမြှင့်စားသုံးမှုမှဦးဆောင် abstinence ၏နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်ရှိနေသေးကြောင်းသကြားရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သကြားကနေ abstinence ၏ 14 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ယခင်ကသကြားအဘို့အတိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုညွှန်း, Pre-abstinence တုံ့ပြန်၏% 12 မှဂလူးကို့စအဘို့အနှိပ် 123-ဇနေ့စဉ် access ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်လီဗာခဲ့ကြွက်များ။ 0.5-ဇနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူအုပ်စုလုပ်ခဲ့တယ် ...
ထို့အပြင်အထက်ပါဖော်ပြထားတဲ့မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့သကြားရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှု "incubate" သို့မဟုတ်ကြီးထွား, abstinence ၏အရှည် (နဲ့အတူပုံShalev et al ။ , 2001) ။ အော်ပရေတာအေးစက်အသုံးပြုခြင်း, Grimm နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2005) ကြောင်း sucrose (မျိုးသုဉ်းအတွက်ကိုနှိပ်လီဗာပြီးတော့တစ်ဦး sucrose-တွဲ cue များအတွက်) ရှာကြံကိုရှာဖွေ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင် abstinence စဉ်အတွင်းတိုးပွားစေပါသည်။ ထူးခြားသည် cue များအတွက်တုံ့ပြန် 30 တပတ်သို့မဟုတ် 1 နေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သကြား abstinence ၏ 1 ရက်အကြာမှာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်သကြား Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence ၏ရလဒ်အဖြစ်အာရုံကြော circuitry အခြေခံလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
4.D ။ "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive": သကြား abstinence စဉ်အတွင်း psychostimulants မှတိုးမြှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှု
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ာင်း (မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တိုးမြှင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်နိုင်သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှပံ့ပိုးနေတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုRobinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ပုံမှန်ာင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်တိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းတစ်ပါတ်မှုအတွက်နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ, ထို့နောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရပ်လိုက်နိုင်သည်။ hyperlocomotion အတွက်မူးယစ်ဆေးရလဒ်များတဲ့အခါအနိမ့်, စိန်ခေါ်မှုထိုးသို့သော်ဦးနှောက်ထဲမှာပင်ကြီးထွားလာရှိရေရှည်တည်တံ့ကြသည်, (သိသာတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနောက်ပိုင်းတွင်ပြောင်းလဲKalivas et al ။ , 1992) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမှအခြားဖို့လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကင်းသို့မဟုတ် phencyclidine မှကြွက်များအတွင်းမလွဲမသွေစိတ်ကြွဆေးအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး, (နဲ့အတူသရုပ်ပြခဲ့ပြီးGreenberg နှင့် Segal, 1985, Kalivas နှင့် Weber, 1988, ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1995, Schenk et al ။ , 1991အရက်နှင့်အတူ), ကိုကင်း Cross-sensitive (Itzhak နဲ့ Martin, 1999ဆေးခြောက်နှင့်အတူ) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Pontieri et al ။ , 2001) ။ တခြားလေ့လာမှု Non-မူးယစ်ဆေးတ္ထုများနှင့်အတူဤအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ပြီ။ ကိုကင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြားအပြုအမူလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive (သရုပ်ပြခဲ့ပြီးAntelman နှင့် Caggiula, 1977, Covington နှင့် Miczek, 2001, Prasad et al ။ , 1998) ။ ဒါ့အပြင် (အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်တိုးပွါးBakshi နှင့်ကယ်လီ, 1994) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999, Nocjar နှင့် Panksepp, 2002) မူးယစ်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးသမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ Cross-sensitizes ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နေ့စဉ်စိတ်ကြွဆေးထိုး (3 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့ sensitized ကြွက် (တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် 10% sucrose မျိုးစုံမြည်းစမ်းဖို့တုန့်ပြန် hyperactive များမှာAvena နှင့် Hoebel, 2003a) ။ ပြောင်းပြန်ကြွက်နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနှင့် Chow စိတ်ကြွဆေးမှ locomotor လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ပြသကျွေးမွေး၏။ အထူးသ, ထိုကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များ (ပင်သကြားထံမှ abstinence ၏ 0.5 ရက်အကြာမှာ, ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းစိတ်ကြွဆေး၏အနိမ့်, စိန်ခေါ်မှုထိုး (8 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) မှတုန့်ပြန် hyperactive များမှာသဖန်းသီး။ 5; Avena နှင့် Hoebel, 2003b) ။ စိတ်ကြွဆေး၏စိန်ခေါ်မှုထိုးပေးထားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ကြွက် (Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Chow, ကြော်ငြာ libitum သကြားနှင့် Chow, ကြော်ငြာ libitum Chow) ကြွက်ကဒီနို့တိုက်ကျွေးရေးအချိန်ဇယားအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်အုပ်ချုပ်ဆား hyperactive မရ, မရကြ၏။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း sucrose access ကိုလည်း (ကိုကင်းနှင့်အတူ Cross-sensitizesGosnell, 2005) နှင့် DA agonist quinpirole ထိခိုက်မခံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (Foley et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောဓါတ်ခွဲခန်းကနေသုံးကွဲပြားခြားနားသော DA agonists နှင့်အတူရလဒ်တွေကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ် DA စနစ်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့် sensitized ကြောင်းသီအိုရီကိုထောကျပံ့။ တိုးမြှင် mesolimbic dopaminergic neurotransmission လွယ်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကစားကတည်းကဤ (အရေးကြီးပါတယ်Robinson နဲ့ Berridge, 1993), နှင့် Poly-ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူစွဲနှင့် comorbidity အထောက်အကူပြုပေမည်။
တစ်ဦး photocell လှောင်အိမ်ထဲမှာ Locomotor လှုပ်ရှားမှုနေ့က0အပေါ်အခြေခံရောင်ခြည်လပ်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကြံစည်ခဲ့။ ကြွက်သတ်မှတ်ထားသောအစားအစာ regimen အပေါ် 21 နေ့ရက်ကာလအဘို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြွက်တုံ့ပြန်ကိုးရက်အကြာမှာ hyperactive ခဲ့ကြသည် ...
4.E ။ "Gateway မှာအကျိုးသက်ရောက်မှု": တိုးမြှင့်အရက်စားသုံးမှုသကြား abstinence စဉ်အတွင်း
တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးထိခိုက်မခံတဲ့ hyperactivity ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ (၏နောက်ဆက်တွဲတိုးချဲ့စားသုံးမှုမှသာဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ကိုမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများတွေ့ပြီEllgren et al ။ , 2006, Henningfield et al ။ , 1990, Hubbell et al ။ , 1993, Liguori et al ။ , 1997, Nichols et al ။ , 1991, Piazza et al ။ , 1989, Vezina, 2004, Vezina et al ။ , 2002, Volpicelli et al ။ , 1991) ။ ကြှနျုပျတို့သညျ "သူတွေရဲ့စားသောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" အဖြစ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကိုးကားပါ။ တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးအခြားယူပြီးပို့ဆောင်အခါလက်တွေ့စာပေအတွက်, ဒီဟာ "တံခါးပေါက်အကျိုးသက်ရောက်မှု" အဖြစ်လူသိများသည်။ တရားဝင်မူးယစ် (ဥပမာနီကိုတင်း) အနေနဲ့တရားမဝင်မူးယစ်ဆေး (ဥပမာကိုကင်း) တစ်ဂိတ်ဝေးအဖြစ်ပြုမူတဲ့အခါ (အထူးသဖြင့်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်လိုင် et al ။ , 2000).
နောက်ပိုင်းတွင်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ရှောင်ကြဉ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြွက် (9% အရက်၏တိုးမြှင်စားသုံးမှုကိုပြသAvena et al ။ , 2004) ။ ဒါဟာသကြားမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုတစ်တံခါးပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ အခြားသူများကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာချိုမြိန်-အရသာပိုနှစ်သက်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များပါလိမ့်မယ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်း (ပြကြပါပြီကာရိုး et al ။ , 2006) ။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ locomotor လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive နှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီအပြုအမူအခြေခံထိုကဲ့သို့သော DA အတွက် adapter နဲ့ဖြစ်ကောင်း opioid လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဖြစ်ဦးနှောက်ထဲမှာယူဆရ neurochemical ပွောငျးလဲဖြစ်ကြသည်။
5 ။ မူးယစ်ဆေးဝါး self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုအကြား NEUROCHEMICAL အလားတူ
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား access ကိုမူးယစ်ဆေး-မှီခိုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားအလားတူဖြစ်ကြောင်းမြောက်မြားစွာအပြုအမူတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအပိုင်းကိုတှငျကြှနျုပျတို့သကြားမှီခိုအခြေခံစေခြင်းငှါ neurochemical တွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြရန်။ ထိုအဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုက်ညီသောအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်သကြားအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာတူနိုငျသောအမှုခိုင်မာစေ။
5.A ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုအတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်း: D1, D ကို2 နှင့် mu-opioid အဲဒီ receptor binding နှင့် mRNA စကားရပ်
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးဦးနှောက်၏ mesolimbic ဒေသများတွင် DA နှင့် opioid receptors ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ် D နဲ့ Pharmacological လေ့လာမှုများ1, D ကို2 နဲ့ D3 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇနောက်ကောက်လေ့လာမှုများသုံးခုစလုံးအဲဒီ receptor Subtype အလွဲသုံးစားမှု၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖျန်ဖြေကြောင်းထင်ရှားပြီ။ : D တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းရှိပါတယ်1 receptors (Unterwald et al ။ , 1994) နှင့် D ကိုတိုး1 binding အဲဒီ receptor (Alburges et al ။ , 1993, Unterwald et al ။ , 2001) ကိုကင်းတုံ့ပြန်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်: D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏သမိုင်းရှိသည်သောမျောက်များ၏ NAc အတွက်အနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်Moore က et al ။ , 1998) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလည်း DA receptors ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်း D ကို accumbens လျော့ချဖို့ပြသပြီ2 အဲဒီ receptor mRNA (ဇော့ et al ။ , 1999, Turchan et al ။ , 1997) နှင့် D ကိုတစ်တိုး3 အဲဒီ receptor mRNA (Spangler et al ။ , 2003) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူရှာဖွေတာဒါတွေက: D ကြောင်းထင်ရှားသောလက်တွေ့လေ့လာမှုများ, ထောကျပံ့2 receptors (ကိုကင်းစွဲချ-စညျးမဉျြးစညျးကမျးများမှာVolkow et al ။ , 1996a, 1996b, 2006).
အလားတူအပြောင်းအလဲများကိုသကြားမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအတူအစီရင်ခံထားပါပြီ။ Autoradiography တိုးချဲ့ D ကိုထုတ်ဖော်ပြသ1 အဆိုပါ NAc နှင့် D ကိုလျော့နည်းသွား2 အဆိုပါ striatum အတွက် binding အဲဒီ receptor (သဖန်းသီး။ 6; Colantuoni et al ။ , 2001) ။ ဤသည်ကြွက်-အောင်ကျွေး Chow မှဆွေမျိုးခဲ့, ဒါကြောင့်ရှိမရှိမသိရ ကြော်ငြာ libitum သကြားလည်းဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသလိမ့်မယ်။ အခြားသူများက D: ထဲမှာကျဆင်းခြင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြ2 ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ sucrose နှင့် Chow ဖို့ကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များ၏ NAc အတွက် binding အဲဒီ receptor (သာ restriced Chow တိုက်ကျွေးBello et al ။ , 2002) ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနဲ့ Chow access ကိုအတူကြွက်လည်း D: ထဲမှာလျှောက်လျော့နည်းရှိ2 အဆိုပါ NAc အတွက်အဲဒီ receptor mRNA နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ကြော်ငြာ libitum Chow ထိန်းချုပ်မှု (Spangler et al ။ , 2004) ။ : D ၏ mRNA အဆင့်ဆင့်3 အဆိုပါ NAc အတွက်အဲဒီ receptor mRNA အဆိုပါ NAc နှင့် caudate-putamen အတွက်တိုးမြှင့်နေကြသည်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် striatum ရဲ့အဆင့်မှာခညျြနှော DA အဲဒီ receptor ပွောငျးလဲ။ : D1 (ထိပ် panel က) binding အဲဒီ receptor ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ Daily သတင်းစာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဂလူးကို့နှင့် Chow (အနက်ရောင်ဘား) ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက်တိုးပွါး ...
အဆိုပါ opioid receptors နှင့်စပ်လျဉ်း mu-receptor binding (ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်တုန့်ပြန်တိုးပွါးဘေလီ et al ။ , 2005, Unterwald et al ။ , 2001, Vigano et al ။ , 2003) ။ binding mu-opioid အဲဒီ receptor နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဓာတ်စာအပေါ်သုံးပတ်အကြာတွင်ကိုလည်းသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ် ကြော်ငြာ libitum Chow ။ ဒီအကြိုးသကျရော (အ accumbens shell ကို, cingulate, hippocampus နှင့် locus coeruleus အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Colantuoni et al ။ , 2001).
5.B ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှု enkephalin mRNA စကားရပ်ပွောငျးလဲ
Enkephalin အဆိုပါ striatum အတွက် mRNA နှင့် NAc (မော်ဖင်းအကိုက်ထပ်ခါတလဲလဲထိုးတုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ဇော့ et al ။ , 1999, Turchan et al ။ , 1997, Uhl et al ။ , 1988) ။ opioid စနစ်များအတွင်းဤအပြောင်းအလဲများ (ကိုကင်း-မှီခိုလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားဆင်တူZubieta et al ။ , 1996).
၎င်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်ခက်ခဲပေမယ့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်လည်း (enkephalin mRNA အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းဖော်ပြရန်Spangler et al ။ , 2004) ။ enkephalin mRNA ၌ဤကျဆင်းခြင်း (အရည်အစားအသောက်များတွင်မွှေးအဆီဖို့ကန့်သတ်နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်ကယ်လီ et al ။ , 2003) ။ အထက်တွင်ကိုးကားအဖြစ်ဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိလျက်ရှိလျော့နည်း enkephalin peptide အတွက် mRNA ရလဒ်များကို၌ဤကျဆင်းခြင်းယူဆပါက, mu-opioid receptors အတွက်အစားထိုးတိုးဘို့အကောင့်နိုင်ဘူး။
5.C ။ နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုအကြိမ်ကြိမ် accumbens အတွက် dopamine ဖြန့်ချိ
အလွဲသုံးစားမှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားအပြင်းထန်ဆုံး neurochemical ဆင်တူရိုးမှားတစ်ခုမှာသုံးပြီးရှာတွေ့ထားပြီ Vivo အတွက် extracellular DA တိုင်းတာရန် microdialysis ။ extracellular DA အတွက်အကြိမ်ကြိမ်တိုးစော်ကားကြသည်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုအမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc အတွက် Extracellular DA တိုး (de Vries နှင့် Shippenberg, 2002, di Chiara နှင့် Imperato, 1988, Everitt နှင့် Wolf က, 2002, ဟာနန်ဒက်ဇ်နှင့် Hoebel, 1988, Hurd et al ။ , 1988, Picciotto နှင့် Corrigall, 2002, Pothos et al ။ , 1991, Rada et al ။ , 1991a) နှင့်မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု (Ito က et al ။ , 2000) ။ DA အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုထားတဲ့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, မတူဘဲသူတို့ကအုပ်ချုပ်ကြသည်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်လွှတ်ပေးရန် (Pothos et al ။ , 1991, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1995အစားအစာမရှိတော့ဝတ္ထုအခါတိရစ္ဆာန်အစားအစာဆုံးရှုံးနေသည်မဟုတ်လျှင်), DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ်အရေးပါတယ်လို့အစာစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ထပ်ခါတလဲလဲ access ကိုအတူ wanesBassareo နှင့် Di Chiara, 1999, di Chiara နှင့် Tanda, 1997, Rada et al ။ , 2005b) ။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အစာကျွေးနို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်း DA တုံ့ပြန်မှုထွက် phased ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
လက်လှမ်း၏ရက်ပေါင်း 1,2နှင့် 21 အပေါ်တိုင်းတာအဖြစ်သို့သော်, ဤသည်အလွန်အရေးပါသည်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနဲ့ Chow နေ့စဉ်တိုက်ကျွေးကြွက်ပုံ (နေ့စဉ်နေ့တိုင်း DA လွှတ်ပေးရန်သဖန်းသီး။ 7; Rada et al ။ , 2005b) ။ ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်, ကြွက်သကြားသို့မဟုတ် Chow တိုက်ကျွေး ကြော်ငြာ libitum, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပဲ Chow မှဝင်ရောက်ခွင့်, ဒါမှမဟုတ်သကြားအရသာကြောင့်ကြွက်နှစ်ခုသာကြိမ်နှင့်အတူကြွက်များကြောင့်အသစ်အဆန်း looses တဲ့အစားအစာပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့တုံး DA တုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုး။ ဤရလဒ်သည် (တစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား-နို့တိုက်ကျွေးရေးအချိန်ဇယားအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြွက်များတွင် accumbens DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့် DA Transporter မြားတှငျပွောငျးလဲ၏တွေ့ရှိချက်များကထောက်ပံ့Bello et al ။ , 2003, Hajnal နှင့် Norgren, 2002) ။ အတူတူအဲဒီရလဒ်တွေကိုသကြားနှင့် Chow မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုပိုအစားအစာထက်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ဖြစ်၏တဲ့ထုံးစံ၌ extracellular DA အတွက်မှုများထပ်တလဲလဲတိုးဖြစ်စေသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ရက် 60 အပေါ် 21 မိဘို့ sucrose သောက်သုံးရန်တုန့်ပြန်သကြားဖြန့်ချိ DA မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအတူကြွက်များ။ ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Dopamine, Vivo အတွက် microdialysis, ရက်ပေါင်း 1,2နှင့် 21 ရက်တွင် The Daily ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow ကြွက် (ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်း) အတွက်တိုးပွါး; မတူတာကတော့, ...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် neurochemical သက်ရောက်မှုက၎င်း၏ postingestive ဂုဏ်သတ္တိများဖို့ဒါမှမဟုတ်သကြားရဲ့အရသာလုံလောက်သောနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိကြောင့်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သကြား orosensory သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းအစာအိမ် fistula နှင့်အတူအတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးဖြစ်ကြောင်းကြွက် (အစားအစာများကိုသုံးစွဲပေမယ့်အပြည့်အဝသူတို့ကိုတွေဟာအစာကြေမနိုင်Smith က 1998) ။ အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးလုံးဝ (Post-စားသုံးမိပါသက်ရောက်မှုဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးBerthoud နှင့် Jeanrenaud, 1982, Sclafani နှင့် Nissenbaum, 1985), သို့သော်နီးပါးမျှကယ်လိုရီဆက်ပြီးနေစဉ်တိရိစ္ဆာန်များသကြားကိုမြည်းစမ်းဖို့ခွင့်ပြုတယ်။
ရိုးရှင်းစွာကြောင့် sucrose ၏အရသာကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်၏ပထမတစ်နာရီအတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးသကြား၏ရလဒ်များကို DA ပင်နေ့စဉ် Bing ၏သုံးပတ်ပြီးနောက်, NAc အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းနေ့ရက်တိုင်းပြပွဲ, (Avena et al ။ , 2006) ။ အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးနောက်ထပ်ပုံမှန်သကြား-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်မထားဘူး။ ဤသည်ကို (NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်၏ပမာဏထုထည်ကိုကျွမ်းလောင်ဘဲ, အ sucrose အာရုံစူးစိုက်မှုမှအချိုးကျကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကတခြားအလုပ်ထောက်ခံပါသည်Hajnal et al ။ , 2004).
5.D ။ acetylcholine လွှတ်ပေးရေးသကြား Bing စဉ်အတွင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည် Accumbens
အတုအယောင်-နို့တိုက်ကျွေးရေး ACH နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ်များကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ နို့တိုက်ကျွေးမှုနှေးကွေးပြီးတော့ရပ်သည့်အခါပုဒ်မ 3.C မှာဖော်ပြထားတဲ့။ (ကန့်ညက်၏အလယ်၌ ACH တိုး accumbens အဖြစ်မာကု et al ။ , 1992) ။ တဦးတည်းအနေနဲ့တိရိစ္ဆာန်တစ်သကြားဖြေရှင်းချက်နဲ့ Chow ၏ပထမဦးဆုံးမုန့်ညက်နှင့်ဝသကဲ့သို့, အလွန်ကြီးမားတဲ့မုန့်ညက်ကြာအခါ satiation ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်သည်အထိမုန့်ညက်တဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်စဲတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ်, ACH များလွှတ်ပေးရန်နှောင့်နှေးသင့်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ ဤသည်မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကားအဘယ်သို့; ဒီကနဦး "မူးရူး" မုန့်ညက်တစ်ဦးနီးကပ်မှဆွဲသောအခါ ACH လွှတ်ပေးရေး (ဖြစ်ပွားခဲ့သည်Rada et al ။ , 2005b).
တိရစ္ဆာန်အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးစဉ်သကြားတစ်ဦးကြီးများမုန့်ညက်ကိုလည်း ယူ. နိုင်သည့်အခါနောက်တခုကျနော်တို့ ACH လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာ။ အစာအိမ် contents တွေကိုအကြီးအကျယ် (ACH များလွှတ်ပေးရန်လျှော့ချ PurgingAvena et al ။ , 2006) ။ ဤသည် ACH (ထို satiation လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သာမန်အားဖြင့်အရေးကြီးသောကြောင်းသီအိုရီပေါ်တွင်အခြေခံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်ပါသည်Hoebel et al ။ , 1999, မာကု et al ။ , 1992) ။ ဒါဟာအစ purging အသုံးပြုပုံများထဲမှ DA ဆန့်ကျင်သော ACH တုံ့ပြန်မှုဖယ်ရှားကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သကြားအပေါ် "Bing" purging ဖြင့်လိုက်ပါသွားသောအခါထို့ကြောင့်အပြုအမူကိုပိုမိုပုံမှန်စားနဲ့တူနေတဲ့မူးယစ်ဆေးများနှင့်လျော့နည်းတာနဲ့တူဖြစ်သော ACH, မပါဘဲ DA ခြင်းဖြင့်အားဖြည့်နေပါတယ်။
5.E ။ သကြားဆုတ်ခွာသည့် accumbens အတွက် dopamine / acetylcholine ချိန်ခွင်လျှာအလုပ်မှာအနှောက်အယှက်
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏အမူအကျင့်ဆိုင်းဘုတ်များပုံမှန်အားဖြင့် NAc အတွက် DA / ACH ချိန်ခွင်လျှာမြားတှငျပွောငျးလဲဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်။ ACH တိုးပွါးနေချိန်တွင်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း DA လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤသည်မညီမမျှမော်ဖင်းအကိုက်, နီကိုတင်းနှင့်အရက်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး, (နဲ့အတူဓာတုဗေဒ-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာစဉ်ကပြသခဲ့ပြီးRada et al ။ , 1996, 2001, 2004) ။ တစ်ဦးနှိပ်စက်ပစ္စည်းဥစ္စာထဲကနေမျှသာ abstinence လည်းဆုတ်ခွာ၏ neurochemical ဆိုင်းဘုတ်များထုတ်ယူနိုင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်အရက်ရှောင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည်ဟုကြွက်များကို (NAc အတွက် extracellular DA လျော့နည်းသွားပါပြီAcquas နှင့် Di Chiara, 1992, Rossetti et al ။ , 1992အလိုအလျောက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်က) နှင့် ACH တိုး (Fiserova et al ။ , 1999) ။ တစ်ဦး bendodiazepine-receptor ရန်အားဖြင့် precipitated တစ်ခု anxyolitic မူးယစ် (diazepam) မှဆုတ်ခွာ extracellular DA ကိုလျှော့ချမထားဘူးသော်လည်း, သူကဖြန့်ချိ (benzodiazepine မှီခိုဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ဟူသော, ACH accumbens ပါဘူးRada နှင့် Hoebel, 2005)
သကြားနဲ့ Chow မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းရှိသည်သောကြွက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း DA / ACH အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ကဲ့သို့ neurochemical မညီမမျှပြသပါ။ ဒါဟာနည်းလမ်းနှစ်ခုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 8သူတို့ opioid ဆုတ်ခွာ precipitate မှ naloxone ပေးသောအခါ, ACH လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးနှင့်အတူ coupled accumbens DA လွှတ်ပေးရေး (တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိColantuoni et al ။ , 2002) ။ တူညီတဲ့အရာအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ (Avena, Bocarsly, Rada ကင်မ်, Hoebel, အတည်မပြုရသေးသော) ၏ 36 ဇပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာအနက်ကိုဘော်ပြမှတဦးတည်းနည်းလမ်းကို up-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် mu-opioid receptors naloxone နှင့်အတူပိတ်ဆို့သောအခါတိရိစ္ဆာန်မြင်ကြဆုတ်ခွာ၏တူညီသောအမျိုးအစားကြုံတွေ့နေကြရသည်, အစားအစာမပါဘဲ opioids လွှတ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့ဖြစ်တယ်။
Extracellular DA (အထက်ဂရပ်) နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Sucrose နှင့် Chow တစ်သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင် naloxone ဆေးထိုး (81 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) အပြီးတွင်အခြေခံ၏ 3% မှလျော့သွားသည်။ Acetylcholine (အနိမ့်ဂရပ်) သည်အတူတူပင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား-access ကိုကြွက်များတွင်% 157 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ...
6 ။ ဆွေးနွေးရန်နှင့်ဆေးခန်းဂယက်ရိုက်
စားနပ်ရိက္ခာသာမန်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာများကဲ့သို့မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Bing နှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့ကြောင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ အလွဲသုံးစားမှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူနှင့် neurochemical တူညီအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကကဲ့သို့ဘုံသကြား, မည်သို့ပင်ဆိုစေအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအခါအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် "စွဲလမ်း" ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု "အမူးရူးကဲ့သို့" ထုံးစံ၌လောင်လေ၏။ ဒါကနိဂုံးချုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သကြားအဘို့အလားတူဖြစ်ကြောင်း limbic system ကို neurochemistry အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအားဖြင့်အားဖြည့်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်များထက်ပြင်းအားအတွက်သေးငယ်ပါ၏ သို့သော်ဤအပြုအမူများနှင့် neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုသဘာဝစစ်ကူတွေနဲ့ရူးနှမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DSM-IV-TR အတွက်မှီခို၏အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများလျစ်လျူရှုမှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ (ဒီတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးAmerican Psychiatric Association, 2000) ။ မ (အချို့ကြွက်များကိုကင်းအဘို့ပြုအဖြစ်ကြွက်, ထိုကဲ့သို့သောသကြားရရှိရန်နာကျင်မှုအမြဲတည်သောအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများ, ရှိနေသော်လည်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသကြားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိလူသိများသည်Deroche-Gamonet et al ။ , 2004) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သကြား-သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အပြုအမူနှင့် neurochemistry အကြားတူညီထုတ်ဖော်စမ်းသပ်ချက်များကျယ်ပြန့်စီးရီး, ကဏ္ဍများ4နှင့်5အတွက်ရက်ပိုင်းအဖြစ်, "သကြားစွဲလမ်း" ၏အယူအဆမှယုံချေးငှားသည်ယင်း၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှတိကျစွာပေးသည်နှင့် testable ထောက်ပံ့ မော်ဒယ်။
6.A ။ Bulimia nervosa
နေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားနှင့် Chow ၏နို့တိုက်ကျွေးရေး regimen မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါသို့မဟုတ် bulimia ရောဂါလူများ၏အမူအကျင့်ပုံစံအချို့ကိုရှုထောင့်ဝေမျှပေးသည်။ Bulimics မကြာခဏ (များသောအားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများအပေါ်, Bing နောက်ပိုင်းတွင်ညနေပိုင်းတွင်ထို့နောက်စောစောနေ့ရက်ကာလ၌စားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်နှင့်Drewnowski et al ။ , 1992, Gendall et al ။ , 1997) ။ ဒီလိုလူနာနောက်ပိုင်းတွင် (အန်သို့မဟုတ် laxative အသုံးပြုမှုအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်စိတ်အားသန်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကဖြစ်စေ, အစားအစာအပြစ်ကိုပယ်ရှားAmerican Psychiatric Association, 2000) ။ Bulimic လူနာ (အနိမ့်β-နဲ့အတူ Endorphins အဆင့်ဆင့်ရှိBrewerton et al ။ , 1992, Waller et al ။ , 1986), အရာသကြားလုံးများအတွက် preference ကိုသို့မဟုတ်တဏှာနှင့်အတူအစာစားခြင်းကလှုံ့ဆော်ပေးပေလိမ့်မည်။ သူတို့ကအစမကြာသေးမီကအစာရှောင်ခြင်းအမူအကျင့်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ရသောထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် insula အတွက် binding mu-opioid အဲဒီ receptor, (လျော့နည်းသွားပါပြီBencherif et al ။ , 2005) ။ ဒါကမူးရူးအောက်ပါကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိစီးပွါးနှင့်အတူခြားနားနေသည်။ သိသိ Bing နှင့်အစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ Bing အပြုအမူရှည်ကူညီပေးသော mu-opioid receptors, မြားတှငျပွောငျးလဲထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ bulimia နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ပယ်သန့်စင်တူတဲ့ဖို့အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုဒ်မ 5.C မှာဖော်ပြထားတဲ့တွေ့ရှိချက်။ , ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြား access ကိုအကြိမ်ကြိမ်သကြား၏အရသာကိုတုန့်ပြန် DA ဖြန့်ချိကြောင်း, bulimia နှင့်အတူဆက်စပ် Bing အပြုအမူတွေကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ DA (လည်းကယ်လိုရီမပါဘဲ DA ဖြန့်ချိသော hypothalamic Self-stimulation ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် bulimia ်ပတ်သက်နေထားပြီးHoebel et al ။ , 1992) ။ DA metabolites ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ် Bulimic လူနာလည်းအစားအစာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုအတွက် DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြသည့်ကျောရိုးအရည်, (အတွင်းအနိမ့်အလယ်ပိုင်း DA လှုပ်ရှားမှုများJimerson et al ။ , 1992).
ထိုကဲ့သို့သော bulimia နှင့် anorexia အဖြစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်, (အချို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက် "စွဲ" ၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိစေခြင်းငှါထောက်ခံမှုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကြား Bing နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုနှင့်အတူအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်အလိုက်အထိုက်နေတတ်ခြုံငုံ similarlites သီအိုရီDavis ကနှင့် Claridge, 1998, Gillman နှင့် Lichtigfeld, 1986, Marrazzi နှင့် Luby, 1986, မာနှင့် Holder, 1997, Riva et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ Auto-စွဲသီအိုရီ (အချို့အစာစားခြင်းမမှန် endogenous opioids တစ်ခုစွဲဖြစ်နိုင်သည်ကိုအဆိုပြုHeubner, 1993, Marrazzi နှင့် Luby, 1986, 1990) ။ ထောက်ခံကြောင်း, Bing စားနှင့် Self-ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၏ပုံစံအတွက်အစာစားချင်စိတ်အလုပ်မဖြစ် (endogenous opioid လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်Aravich et al ။ , 1993).
Bulimic လူနာ (Non-ကယ်လိုရီဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အလွန်အကျွံပမာဏအပေါ် binge ပါလိမ့်မယ်Klein et al ။ , 2006), သူတို့ကချိုမြိန် orosensory ဆွကနေအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိကြောင်းအကြံပြု။ ကျနော်တို့ကစဉ်အတွင်းအဆိုပါ accumbens အတွက်မွတ်မပြေနိုင်သော-ဆက်စပ် ACH အားဖြင့် DA unopposed အရွက်ကိုပြသကြပါပြီ (ပုဒ်မ 5.D ။ ) ။ ဤသည် neurochemical ပြည်နယ်ပုံကြီးချဲ့မူးရူးစားရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပွငျပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားစားသုံးမှုစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူ Cross-sensitizes နှင့်အရက်စားသုံးမှုလှုံ့ကြောင်း (ကဏ္ဍများ 4.D ။ နှင့် 4.E ။ ) တွေ့ရှိချက် (bulimia နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကြားရှိ comorbidity နှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း,Holder et al ။ , 1994).
6.B ။ အဝလွန်ခြင်း
အဝလွန်ခြင်း (US မှာသေမင်း၏ဦးဆောင်ကာကွယ်နိုင်သောအကြောင်းတရားများတစ်ခုဖြစ်တယ်Mokdad et al ။ , 2004) ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ (သကြားစားသုံးမှုအတွက်တိုးနှင့်အတူအဝလွန်ခြင်း၏ဖြစ်ပွားမှုများတွင်မြင့်တက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပါပြီပေါ et al ။ , 1992, Elliott သည် et al ။ , 2002, Howard နှင့် Wylie-rosette, 2002, Ludwig et al ။ , 2001) ။ အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန (တစ်ဦးချင်းအပျော့-သောက်စားသုံးမှုအတိတ် 500 နှစ်များတွင်နီးပါး 50% အထိတိုးလာသည်ဟုအစီရင်ခံထားပါတယ်Putnam နှင့် Allhouse, 1999) ။ သကြားစားသုံးမှု (အလှည့်ထဲမှာသကြားဓာတ်၏နောက်ထပ်စားသုံးမိစေပါတယ်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုတိုးလာ၏နံပါတ်နှင့် / သို့မဟုတ် opioid receptors အဘို့အဆှဖှေဲ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါဖူလာ et al ။ , 1985) ။ အမှန်စင်စစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားဝင်ရောက်ခွင့်၏အစားအသောက်များတွင်အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြွက် (ပုဒ်မ 5.A ။ ) opioid အဲဒီ receptor အပြောင်းအလဲများပြသ; သို့သော် 10% sucrose သို့မဟုတ် 25% ဂလူးကို့စသုံးပြီးတဲ့အစားအစာအပေါ်တစ်လအကြာတွင်ဤတိရိစ္ဆာန်များ (အဝလွန်ဖြစ်လာကြဘူးColantuoni et al ။ , 2001, Avena နှင့် Hoebel, 2003b), အခြားသူများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပေမယ့်တစ်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ (Toida et al ။ , 1996လောင်စာထိရောက်မှု၏), ဆုံးရှုံးမှု (Levine et al ။ , 2003) နှင့် sucrose ကျွေးမွေးကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုး (Bock et al ။ , 1995, Kawasaki et al ။ , 2005) နှင့်ဂလူးကို့စ (Wideman et al ။ , 2005) ။ (သကြားစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အများစုဟာလေ့လာမှုများတစ်မူးရူး-inducing အစားအစာမသုံးပါဘူး, လူ့အဝလွန်ရန်အဘာသာပြန်ချက်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်Levine et al ။ , 2003) ။ ပုဒ်မ 4.A ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း။ ဒါကြောင့် (အတည်မပြုရသေးသော, Avena, Bocarsly, Rada ကင်မ်နှင့် Hoebel) ကြှနျုပျတို့၏မော်ဒယ်အတွက်ကြွက် Chow စားသုံးမှုလျော့ကျလာခြင်းဖြင့် sucrose သို့မဟုတ်ဂလူးကို့စကယ်လိုရီများအတွက်လျော်ကြေးပေးကြောင်းပေါ်လာသည်။ သူတို့ (ပုံမှန်နှုန်းအလေးချိန်ရရှိColantuoni et al ။ , 2002) ။ ဒါကအားလုံးကြား၏စစ်မှန်သောမည်မဟုတ်ပါ။
Fructose ဂလူးကို့စသို့မဟုတ် sucrose ထက်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းထူးခြားတဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Fructose (အူဆင်းနှင့်ပန်ကရိယကနေဂလူးကို့စလွှတ်ပေးအင်ဆူလင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့သော်လည်းထပ်မံစုပ်ယူSato et al ။ , 1996, Vilsboll et al ။ , 2003), fructose အင်ဆူလင်ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေမယ့် (ကမလွှတ်ဘူးဟင်း, 1989, le နှင့် Tappy, 2006, Sato et al ။ , 1996) ။ အင်ဆူလင် (အစာစားခြင်းဟန့်တားသဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုအထူးပြုSchwartz et al ။ , 2000) နှင့်တိုးပွားလာ leptin လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့် (Saad et al ။ , 1998), အရာလည်းအစားအစာစားသုံးမှုတားစီးနိုင်ပါတယ်။ High-fructose ပြောင်းဖူးရည်၏အစားအစာပျံ့နှံ့နေတဲ့အင်ဆူလင်နှင့် leptin အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် (Teff et al ။ , 2004), တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မှပံ့ပိုး။ ထို့ကြောင့် fructose စားသုံးမှုပုံမှန်အားဖြင့်ဂလူးကို့စသို့မဟုတ် sucrose တစ်ဦးအညီအမျှကယ်လိုရီမုန့်ညက်နှင့်အတူတရပ်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့မွတ်မပြေ၏ဒီဂရီမှုမပေးပေလိမ့်မည်။ High-fructose ပြောင်းဖူးရည်အမေရိကန်အစားအစာ (များတွင်အဓိကမဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်လာသည်ကတည်းကပေါ et al ။ , 2004) နှင့်အင်ဆူလင်နှင့် leptin အပေါ်အချို့သောသက်ရောက်မှုကင်းမဲ့သောကြောင့်ကြွက်မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေးထားသည့်အခါအဝလွန်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်များအတွက်အလားအလာအေးဂျင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပူဇော်သောအခါ, fructose အပေါ်မှီခိုလက္ခဏာသရုပ်များမှာဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ သို့သော်ချိုမြိန်အရသာဟာ NAc အတွက် DA ၏ထပ်ခါတလဲလဲလွှတ်ပေးရန်ထုတ်ယူနိုင်ရန်လုံလောက်သောကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီး (ပုဒ်မ 5.C ကြည့်ရှုပါ။ ), ကျွန်တော်တစ်ဦးမူးရူး-နညျးတူကိုလောင်မဆိုချိုမြိန်အရသာဆိုင်းဘုတ်များထုတ်လုပ်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြောင်း hypothesize မှီခို၏။
ကျနော်တို့သကြားကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှေးခယျြနေစဉ်, မေးခွန်း Non-ချိုမြိန်, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်မှီခိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအဖြစ်ပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခြားသူတွေကိုပြသကြပြီမဟုတ်စဉ်မှီခိုအချို့ဆိုင်းဘုတ်များ, ကောင်ဆီဥနှင့်သိသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ ကြွက်များတွင်အဆီ Bing စင်ကြယ်သောအဆီ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်) အားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို, မွှေးအဆီကွတ်ကီးများ (နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်Boggiano et al ။ , 2005, Corwin, 2006), သို့မဟုတ်မွှေးအဆီ Chow (Berners, Avena နှင့် Hoebel, အတည်မပြုရသေးသော) ။ အဆိုပါ NAc ၌ပါသောဆီထုတ် DA မှထပ်ခါတစ်လဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (Liang et al ။ , 2006) ။ သကြားလိုပဲတစ်ဦးအဆီကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာအပေါ် bingeing (enkephalin mRNA လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်စူးရှ access ကိုအတူကြည့်ရှုလေ့လာသည်မဟုတ်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု accumbens အတွက် opioid system ကိုထိခိုက်စေဖို့လူသိများသည်ကယ်လီ et al ။ , 2003) ။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည့် baclofen (ဂါဘမြို့သား-B က agonist) နဲ့ကုသမှုကိုလည်း (အဆီမူးရူးစားမှုကိုလျော့နည်းစေBuda-Levin et al ။ , 2005).
ဒါကအားလုံးအဆီမှီခိုအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းဆိုလိုပေမယ့်အဆီ-Bing ကနေဆုတ်ခွာကြောင့်သကြားနှင့်အတူရှိသကဲ့သို့သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ le Magnen (1990) naloxone fat- နဲ့သကြားကြွယ်ဝသောအစားအစာများ (ဥပမာ, ဒိန်ခဲတွေ, cookies, ချောကလက်ချစ်ပ်) ၏မျိုးစုံပါရှိသည်သောကော်ဖီဆိုင်-စတိုင်အစားအစာပေါ်တွင်ကြွက်များတွင်ငွေထုတ် precipitate နိုင်မှတ်ချက်ချသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့စင်ကြယ်သောအဆီ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်) သို့မဟုတ်တစ်သကြားဆီပေါင်းစပ်ကျွေးမွေး, မအခြားသူများထိုကဲ့သို့သောရလဒ်ထုတ်ဝေထားပြီးကြွက်များတွင် naloxone-precipitated သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ရုပ်သိမ်းလက္ခဏာလေ့လာတွေ့ရှိကြပြီမဟုတ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝသကြားနဲ့အဆီ Bing နှင့်အပြုအမူအပေါ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအကြားခြားနားချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအတန်း (ဥပမာ, dopamine agonists vs. opiates) တိကျသောအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များရှိသည်, ကကွဲပြားခြားနားသော macronutrients လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုအဆီစားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးများအကြားအဆီသို့မဟုတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏တဏှာသေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ကတည်းက, သကြား (လက်ရှိ bingeing, ရုပ်သိမ်းရေး, abstinence-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အားလုံးသရုပ်ပြခဲ့ကြရာများအတွက်သာအရေးပါတယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည် ကဏ္ဍများ4နှင့် 5) ။
လူသားတွေအတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကို အသုံးပြု. မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်အဝလွန်ခြင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသူများအပါအဝင်ထစ်အငေါ့စားအပြုအမူတွေ, မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့တူညီရှိစေခြင်းငှါစိတ်ကူးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ fMRI signal ကိုအတွက်တဏှာ-related အပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးတဏှာအလားတူအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ, တုန့်ပြန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအထပ်ကို (hippocampus, insula နှင့် caudate အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်Pelchat et al ။ , 2004) ။ အလားတူပင်ပေ Scan ဖတ်အဝလွန်ဘာသာရပ်များ striatal D ကိုတစ်လျှော့ချရေးကိုပြသကြောင်းထုတ်ဖေါ်2 အဆိုပါဘာသာရပ်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ဝမ် et al ။ , 2004b) ။ : D ၌ဤကျဆင်းခြင်း2 အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် receptors (မူးယစ်စွဲဘာသာရပ်များအစီရင်ခံသည့်လျှော့ချဖို့ပြင်းအားအတွက်ဆင်တူသည်ဝမ် et al ။ , 2001) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်အတွက် DA စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် DA လှုပ်ရှားမှုမြားတှငျပွောငျးလဲအစားအစာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှသူတို့ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးသောအယူအဆမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိတ်မုန့်နဲ့ရေခဲမုန့်အဖြစ်အထူးသဖြင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ, ထိတွေ့, (ထို anterior insula နှင့်ညာဘက် orbitofrontal cortex အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများမြှင့်လုပ်ဆောင်ဝမ် et al ။ , 2004a), အစားအစာကိုရယူဖို့ဖို့လှုံ့ဆျောမှုအခြေခံရသော (Rolls, 2006).
7 ။ နိဂုံး
တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေ, ကရှင်သန်မှုစားစရာဘို့အဘို့ဟာမွေးရာပါအလိုဆန္ဒရှိသည်ဖို့လူသား၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအလိုဆန္ဒကော်လံကလွဲနေတယ် go စေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်အချို့သောအဝလွန်နှင့် bulimic လူနာအပါအဝင်အချို့သောလူတွေ, သုခချမ်းသာနှင့်အတူနှောင့်ယှက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာတခုတခုအပေါ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့မှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ "အစာစွဲလမ်း" ၏အယူအဆပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများ, လက်တွေ့အကောင့်များနှင့် Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်၏အခြေခံပေါ်မှာအစားအသောက်များတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်အထည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများအကြားမျဉ်းပြိုင်၏သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ coupled အဝလွန်ခြင်းအတွက်မြင့်တက်, ဒီအယူအဆကိုမှယုံကြည်စိတ်ချရအားပေးတော်မူပြီ။ အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်သက်သေအထောက်အထားအချို့အခြေအနေများတွင်, သကြားဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအပြုအမူများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူကြောင်း neurochemical ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, ထိုသီအိုရီကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကြွက်များတွင်သက်သေအထောက်အထားအရ, သကြားနဲ့ Chow မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုတစ်ဦး "မှီခို" ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤသည်စစ်ဆင်ရေး Bing, ရုပ်သိမ်းရေး, တဏှာနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive များအတွက်စမ်းသပ်မှုများကသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ရောဂါသို့မဟုတ် bulimia အစာစားမူးရူးနှင့်အတူအချို့သောလူများအဆိုပါစာပေးစာယူသပိတ်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတွေအတွက်ဒီက "အစားအသောက်စွဲလမ်း" ဖုန်းဆက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမဖြေကြားခံရဖို့မရှိသေးပါကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဤသုံးသပ်ချက်ကိုပြအစားအစာနှင့်တစ်သကြားဖြေရှင်းချက်ကိုမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအတူကြွက်တစ်အပြုအမူတွေ၏ကြယ်များနှင့်ဆန္ဒအလျောက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ Self-စီမံခန့်ခွဲကြောင်းကြွက်၏ဝိသေသဖြစ်ကြောင်းအပြိုင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှစ်ဦးစလုံးဖျောပွနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ aggregrate မှာတော့ဒီသကြားစွဲလမ်းနိုင်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် reseach USPHS ထောက်ပံ့ငွေ MH-65024 (BGH), DA-10608 (BGH), DA-16458 (NMA မှမိဿ) နှင့်ယာဉ်ကြော Foundation ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Acquas အီး, Carboni အီး, မှီခိုကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရေး Di Chiara G. အလေးနက်စိတ်ကျရောဂါ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1991; 193: 133-134 ။ [PubMed]
Acquas အီး, opiate abstinence ကာလအတွင်းမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ mesolimbic dopamine ဂီယာအရေးကြီးတဲ့၏ Di Chiara G. အစီးပွားပျက်ကပ်။ J ကို Neurochem ။ 1992; 58: 1620-1625 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders Fouth Edition ကိုစာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR) American Psychiatric Association ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2000 ။
Antelman သည် SM, Caggiula AR ။ Norepinephrine-dopamine interaction ကနှင့်အပြုအမူ။ သိပ္ပံ။ 1977; 195: 646-653 ။ [PubMed]
Antelman သည် SM, Caggiula AR ။ လှိုမူးယစ်ဆေးာင်းအောက်ပါအတိုင်း: ဂယက်ရိုက်။ Crit ဗြာ Neurobiol ။ 1996; 10: 101-117 ။ [PubMed]
Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်း N. သကြားအလေ့အထကိုလျက်။ နန်စီ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်း; စန်တာမော်နီကာ: 1996 ။
Aravich PF, Rieg TS, Lauterio တီဂျေ, Doerries LE ။ beta-နဲ့အတူ Endorphins နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကန့်သတ်အကြောင်းမဲ့ကြွက်များတွင်မူမမှန် dynorphin: anorexia nervosa မှဆက်ဆံရေးဟာ? ဦးနှောက် Res ။ 1993; 622: 1-8 ။ [PubMed]
Ary M က, Chesarek W က, Sorensen သည် SM, ကြွက်များတွင် Lomax P. Naltrexone-သွေးဆောင် hypothermia ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1976; 39: 215-220 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Carrillo, CA, Needham L ကို, Leibowitz SF, Hoebel BG ။ သကြား-မှီခိုကြွက် unsweetened အီသနော၏တိုးမြှင်စားသုံးမှုပြသပါ။ အရက်။ 2004; 34: 203-209 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Rada P ကို, မော N ကို, Hoebel BG ။ တစ်မူးရူးအချိန်ဇယားကိုထုတ်ပြန်အပေါ် Sucrose အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးအကြိမ်ကြိမ် dopamine accumbens နှင့် acetylcholine မွတ်မပြေနိုင်သောတုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ neuroscience ။ 2006; 139: 813-820 ။ [PubMed]
ဘေလီတစ်ဦးက, Gianotti R ကို, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ persistent mu-opioid ၏ upregulation, ဒါပေမယ့်ရေရှည်ဆုတ်ခွာကအရှိန်မြင့်တက်လာထိုး၏ဦးနှောက်ထဲမှာမ adenosine, receptors "မူးရူး" ကိုကင်း-ကုသကြွက်များ။ synapses ။ 2005; 57: 160-166 ။ [PubMed]
Bakshi VP, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ် accumbens သို့မျိုးစုံမော်ဖင်းအကိုက် microinjections အောက်ပါနို့တိုက်ကျွေးရေး၏အသိနှင့်အအေးစက်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 648: 342-346 ။ [PubMed]
Bals-Kubik R ကို, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ opioid ရန်နှင့် Kappa-agonists ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဗဟိုကမကထပြုခဲ့ကြသည်သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 1989; 98: 203-206 ။ [PubMed]
Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 225-234 ။ [PubMed]
Bassareo V ကို, prefrontal နှင့်ကြော်ငြာ libitum ကျွေးမွေးကြွက်များတွင်အစားအသောက်လှုံ့ဆော်မှုမှ accumbal dopamine ဂီယာ၏တုန့်ပြန်ပေါ် Associates နှင့် nonassociative သင်ယူမှုယန္တရားများ၏ Di Chiara G. အ Differential သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 851-861 ။ [PubMed]
Bassareo V ကို, mesolimbic dopamine စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှ၎င်း၏စပ်လျဉ်း၏နို့တိုက်ကျွေးရေး-သွေးဆောင် activation ၏ Di Chiara G. အ Modulation ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 4389-4397 ။ [PubMed]
Bello NT, Sweigart KL, Lakoski JM, Norgren R ကို, Hajnal အေကန့်သတ်ကြွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးတစ်ခု upregulation အတွက်စီစဉ်ထား sucrose access ကိုရလဒ်များကိုနှင့်အတူအစာကျွေး။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003; 284: R1260-1268 ။ [PubMed]
Bencherif B, Guarda AS, Colantuoni ကို C, Ravert HT, Dannals RF, Frost က JJ ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အတွက် binding ဒေသဆိုင်ရာ mu-opioid အဲဒီ receptor bulimia nervosa အတွက်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအမူအကျင့်တွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Nucl Med ။ 2005; 46: 1349-1351 ။ [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1998; 28: 309-369 ။ [PubMed]
Berthoud HR, ကြွက်များတွင် Jeanrenaud ခ Sham နို့တိုက်ကျွေးရေး-သွေးဆောင် cephalic အဆင့်အင်ဆူလင်လွှတ်ပေးရန်။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1982; 242: E280-285 ။ [PubMed]
Bienkowski P ကို, Rogowski တစ်ဦးက, Korkosz တစ်ဦးက, Mierzejewski P ကို, Radwanska K ကို Kaczmarek L ကို, Bogucka-Bonikowska တစ်ဦးက, abstinence စဉ်အတွင်းအရက်သေစာ-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် Kostowski ဒဗလျူအချိန်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2004; 14: 355-360 ။ [PubMed]
Blomqvist အို Ericson M က, ဂျွန်ဆင် DH, အိန်ဂျယ်ဂျာ Soderpalm ခမိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုကြွက်များတွင်: နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ် subchronic နီကိုတင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1996; 314: 257-267 ။ [PubMed]
Bock ဘီစီ, Kanarek RB, ဧပြီ JR ။ အစားအသောက်များတွင်၏ mineral အကြောင်းအရာကြွက်များတွင် sucrose-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းပွောငျးလဲ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 659-668 ။ [PubMed]
Boggiano MM, Chandler ကို PC, Viana JB, Oswald KD, Maldonado CR, Wauford PK ။ ပေါင်းလိုက်သော Diet နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမူးရူး-စားသုံးခြင်းကြွက်များတွင် opioids မှပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုကျလာသော။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005; 119: 1207-1214 ။ [PubMed]
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာသို့မော်ဖင်းအကိုက် Intracranial Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1981; 28: 551-555 ။ [PubMed]
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ ရေရှည်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူနှင့်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အဆိပ်အတောက်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1985; 254: 81-83 ။ [PubMed]
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ opioid နှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်အားဖြည့်အတွက် ventral tegmental dopamine စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ NIDA Res Monogr ။ 1986; 67: 190-196 ။ [PubMed]
ပေါ GA, Nielsen SJ, Popkin BM ။ အဖျော်ယမကာအတွက် High-fructose ပြောင်းဖူးရည်၏စားသုံးမှုအဝလွန်ခြင်း၏ကပ်ရောဂါအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 2004; 79: 537-543 ။ [PubMed]
ပေါ GA, York က B ကို, အဝလွန်ခြင်း၏အကြောင်းတရားများနှင့်ကုသမှုအပေါ်အဝလွန်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ထင်မြင်ချက်အ DeLany ဂျေတစ်ဦးကစစ်တမ်းကောက်။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 1992; 55: 151S-154S ။ [PubMed]
Brewerton TD, Lydiard RB, Laraia MT, je, Ballenger JC ခါ။ bulimia nervosa အတွက် CSF beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် dynorphin ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 149: 1086-1090 ။ [PubMed]
Buda-Levin တစ်ဦးက, Wojnicki FH, Corwin RL ။ Baclofen မူးရူး-type အမျိုးအစားအခြေအနေများအောက်တွင်အဆီစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 176-184 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Carr က KD ။ နာတာရှည်အစာကိုကန့်သတ်: မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့် striatal ဆဲလ်အချက်ပြအပေါ်သက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း။ Physiol ပြုမူနေ 2006 [PubMed]
ME Carroll ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် reinstatement အတွက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့၏အခန်းကဏ္ဍကို။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1985; 16: 95-109 ။ [PubMed]
ကာရိုး ME, အန်ဒါဆင်ဟာ MM, မော်ဂန်အေဒီ။ ရွေးချယ်မြင့်မားသော (သူ၏) နှင့်အနိမ့် (Los) saccharin စားသုံးမှုများအတွက်ရပ်ကြီးကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Psychopharmacology (Berl) 2006 [PubMed]
Châu: D, Rada PV, Kosloff RA, Hoebel BG ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Cholinergic, M1 receptors အပြုအမူစိတ်ကျရောဂါဖျန်ဖြေ accumbens ။ fluoxetine များအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှမြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999; 877: 769-774 ။ [PubMed]
ရူ့ JF, Wassum KM, Heien ML, Phillips က PE, Wightman RM ။ Cannabinoids နိုးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် subsecond dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 4393-4400 ။ [PubMed]
Colantuoni ကို C, Rada P ကို, ဆက်မက်ကာသီ J ကို, Patten ကို C, Avena မိုင်, Chadeayne တစ်ဦးက, Hoebel BG ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု endogenous opioid မှီခိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အထောက်အထား။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 2002; 10: 478-488 ။ [PubMed]
Colantuoni ကို C, Schwenker J ကို, ဆက်မက်ကာသီ J ကို, Rada P ကို, Ladenheim B, Cadet JL, Schwartz GJ, Moran TH, Hoebel BG ။ အလွန်အကျွံတွင်းသကြားဓာတ်စားသုံးမှု dopamine နှင့်ဦးနှောက်အတွက် mu-opioid receptors မှ binding ပွောငျးလဲ။ Neuroreport ။ 2001; 12: 3549-3552 ။ [PubMed]
လာ DE, Gade-Andavolu R ကို, Gonzalez N ကို, Wu က S, Muhleman D ကို, ချန်ကို C, Koh သည်: P, Farwell K ကို Blake က H ကို, Dietz, G, MacMurray JP, Lesieur HR, Rugle LJ, Rosenthal RJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် neurotransmitter မျိုးဗီဇ၏နောက်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Clin မျိုးရိုးဗီဇ။ 2001; 60: 107-116 ။ [PubMed]
Corwin RL ။ ကြွက် Bingeing: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူတစ်ခုမော်ဒယ်? အစာစားချင်စိတ်။ 2006; 46: 11-15 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Covington သူ, Miczek Ka ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲလူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, ကိုကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်။ 2001-158: 388; အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး "Bing" Psychopharmacology (Berl) 398 အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ [PubMed]
DL လုပျရနျ။ အင်ဆူလင်၏ပေါင်းစပ်နှင့် Secret အပေါ် mannose နှင့် fructose ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပန်ကရိယ။ 1989; 4: 2-9 ။ [PubMed]
Davis ကနေ C, Claridge G. အဒီစွဲလမ်းအဖြစ်မမှန်စားသုံးခြင်း: တစ် psychobiological ရှုထောင့်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1998; 23: 463-475 ။ [PubMed]
de Witte P ကို, Pinto, E, Ansseau M က, Verbanck P. အရက်နှင့်ဆုတ်ခွာ: တိရိစ္ဆာန်သုတေသနကနေလက်တွေ့အရေးကိစ္စများဖြစ်သည်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27: 189-197 ။ [PubMed]
Deas D ကိုမေလအမတ်, Randall ကို C, ဂျွန်ဆင် N ကို, ဆယ်ကျော်သက်အရက်သမား၏ Anton R. Naltrexone ကုသမှု: open-တံဆိပ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ J ကိုကလေးမြီးကောင်ပေါက် Psychopharmacol ။ 2005; 15: 723-728 ။ [PubMed]
Deneau, G, Yanagita T က, Seevers MH ။ မျောက်တို့က psychoactive တ္ထုများ၏ self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacologia ။ 1969; 16: 30-48 ။ [PubMed]
DesMaisons K. သင့်ပြီးခဲ့သည့်အစားအသောက်များတွင် !: အဆိုပါသကြားစှဲလမျးသူရဲ့အလေးချိန်-အရှုံးအစီအစဉ်။ ကျပန်းအိမ်; တိုရွန်တို: 2001 ။
di Chiara, G, opiates, အရက်နှင့် barbiturates အားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး Imperato အေဦးစားပေးဆွ: လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များတွင် transcerebral Dialysis နှင့်အတူလေ့လာမှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1986; 473: 367-381 ။ [PubMed]
di Chiara, G, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ dopamine ဂီယာ၏ reactivity ကို၏ Tanda G. အတုံး: အ CMS သို့မော်ဒယ်အတွက် anhedonia တစ်ဦးထဲကဓာတုပစ်စညျးအမှတ်အသား? Psychopharmacology (Berl) 1997; 134: 351-353 ။ [PubMed]
Dickinson တစ်ဦးက, Wood က N ကို, Smith က JW ။ ကြွက်များကရှာကြံအရက်သေစာ: အရေးယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထ? QJ Exp Psychol ခ 2002; 55: 331-348 ။ [PubMed]
Drewnowski တစ်ဦးက, Krahn DD, Demitrack MA, Nairn K ကို Gosnell BA ဘွဲ့။ opioid ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား: ချိုမြိန် High-အဆီပါတဲ့အစားအစာများအတွက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဦးစားပေးမြည်းစမ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1992; 51: 371-379 ။ [PubMed]
Dum J ကို, Gramsch ကို C အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကသွေးဆောင်ဆုလာဘ်များက hypothalamic beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins ရေကန်၏ Herz အေ Activation ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1983; 18: 443-447 ။ [PubMed]
Ellgren M က, Spano သည် SM, Hurd YL ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်ထိတွေ့ opiate စားသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် opioid limbic အာရုံခံလူဦးရေပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2006 EPub ။ [PubMed]
Elliott သည်အက်စ်အက်စ်, Keim NL, Stern ပာ JS, Teff K ကိုဟာဗဲလ် PJ ။ Fructose, ကိုယ်အလေးချိန်, နှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံ syndrome ရောဂါ။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 2002; 76: 911-922 ။ [PubMed]
Espejo EF, Stinus L ကို, Cador M က, ပူပန်းကန်စမ်းသပ်မှုများတွင်အပြုအမူအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone ၏ Mir ဃအကျိုးသက်ရောက်မှု: ကြွက်များတွင်တစ်ခု ethopharmacological လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 1994; 113: 500-510 ။ [PubMed]
Everitt BJ, ME Wolf ။ Psychomotor လှုံ့ဆော်စွဲ: တစ်အာရုံကြောစနစ်များကိုရှုထောင့်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3312-3320 ။ [PubMed]
Ferrario CR, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား pretreatment ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူများ၏နောက်ဆက်တွဲတင်းမာမှုအရှိန်မြှင့်။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2007; 17: 352-357 ။ [PubMed]
SE, Andrews က N. အနိမျ့သော်လည်းမ buspirone မြင့်မားဆေးများ File diazepam ဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic သက်ရောက်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1991; 105: 578-582 ။ [PubMed]
SE, Lippa AS၊ ဘီဘီ၊ လီပပါ MT ဖိုင်မှတ်တမ်း။ စိုးရိမ်စိတ်၏ယူနစ် 8.4 တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Crawley JN, et al, အယ်ဒီတာများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လက်ရှိ protocols များ။ ယောဟနျသ Wiley & ၏သား, Inc ။ ; Indianapolis: 2004 ။
Finlayson, G ဘုရင် N ကို, ဒဲလ် je ။ ဒါကြောင့် '' အကြိုက် '' dissociate နှင့်လူသားတွေအတွက်အစားအစာများကိုအဘို့ '' လို 'ဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? တစ်ဦးကဝတ္ထုစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2007; 90: 36-42 ။ [PubMed]
Fiserova M က, Consolo S က, Krsiak အမ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်နျူကလိယအတွက် acetylcholine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကို induces core နဲ့ shell ကို accumbens: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 142: 85-94 ။ [PubMed]
Foley Ka, Fudge MA, Kavaliers M က, Ossenkopp KP ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးက multivariable စာမေးပွဲ: Quinpirole-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း sucrose ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006; 167: 49-56 ။ [PubMed]
naltrexone အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်အပေါ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ 1 လူနာစုစုပေါင်းနှစ်ခုအလိုက်တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု: Foster J ကို, ဘရူကို C, သံမဏိတီ Naltrexone implants လုံးဝ opiate detoxification အပြီးအစောပိုင်း (101 လ) relapse တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2003; 8: 211-217 ။ [PubMed]
ဖူလာ၎င်းကို, Getto CJ, ဆွစ်ဖ် WJ, Carlson ih ။ သကြား, opioids နှင့်မူးရူးစား။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1985; 14: 673-680 ။ [PubMed]
Galic MA, Persinger MA ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အခွား sucrose စားသုံးမှု: sucrose ဖယ်ရှားရေးနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ oestrus ကာလကာလအတွင်းမှာ "nippiness" တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 2002; 90 ။ 58-60 ။ [PubMed]
Gendall Ka, Sullivan က PE, Joyce PR စနစ်, Carter ကအက်ဖ်အေ, Bulik CM ။ bulimia nervosa နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏အဆိုပါအာဟာရစားသုံးမှု။ int J ကို disorders စားပါ။ 1997; 21: 115-127 ။ [PubMed]
ဇော့က F, Stinus L ကို, Bloch B က, က Le Moines C. နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုနှင့်အလိုအလျောက်ရုပ်သိမ်းကြွက် striatum အတွက် dopamine အဲဒီ receptor နှင့် neuropeptide ဗီဇစကားရပ်၏ပြုပြင်မွမ်းမံနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 481-490 ။ [PubMed]
Gerber GJ, ပညာရှိ RA ။ သွေးကြောသွင်းကင်းခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Pharmacological စည်းမျဉ်း: တစ် variable ကိုထိုးပါရာဒိုင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1989; 32: 527-531 ။ [PubMed]
အီသနော၏ Gessa GL, Muntoni က F, collu M က, Vargiu L ကို, Mereu G. အနိမ့်ဆေးများဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1985; 348: 201-203 ။ [PubMed]
Gillman MA, Lichtigfeld FJ ။ အဆိုပါ opioids, dopamine, cholecystokinin နှင့်အစာစားခြင်းမမှန်။ Clin Neuropharmacol ။ 1986; 9: 91-97 ။ [PubMed]
Glass ကို MJ, Billington CJ, Levine AS ။ Opioids နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု: ဖြန့်ဝေအလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်း? Neuropeptides ။ 1999; 33: 360-368 ။ [PubMed]
Glick SD, Shapiro RM, Drew KL, မင်ဒ PA ဆိုပြီး, Carlson ဖြစ်မှု။ ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်များမှ Sprague-Dawley ဆင်းသက်လာကြွက်အကြားအလိုအလျောက်များနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လှည့်အမူအကျင့်၌၎င်း, စိတ်ကြွဆေးထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ကွာခြားချက်များ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1986; 38: 67-70 ။ [PubMed]
Glimcher PW, Giovino AA ကို, Hoebel BG ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Neurotensin Self-ဆေးထိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 1987; 403: 147-150 ။ [PubMed]
Glimcher PW, Giovino AA ကို, Margolin DH, Hoebel BG ။ အဆိုပါ ventral midbrain သို့ထိုးသွင်းကာ enkephalinase inhibitor, thiorphan ကသွေးဆောင် Endogenous opiate ဆုလာဘ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1984; 98: 262-268 ။ [PubMed]
Glowa JR, ဆန် KC, Matecka: D, Rothman RB ။ Phentermine / fenfluramine မျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Neuroreport ။ 1997; 8: 1347-1351 ။ [PubMed]
Greenberg bd, Segal DS ။ phencyclidine (PCP) နှင့်စိတ်ကြွဆေးများအကြား acute နှင့်နာတာရှည်အမူအကျင့် interaction က: အချို့ PCP-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေအတွက် dopaminergic အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထောက်အထား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1985; 23: 99-105 ။ [PubMed]
Haber SN, ထိုမျောက် telencephalon ၏ Basal ganglia နှင့် limbic-ဆက်စပ်ဒေသများတွင် preproenkephalin messenger ကိုအာအန်အေ၏ Lu ကဒဗလျူဖြန့်ဖြူး။ neuroscience ။ 1995; 65: 417-429 ။ [PubMed]
Hajnal တစ်ဦးက, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Rada PV, Lenard အဆိုအရ L ကို, Hoebel BG ။ အဆိုပါ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် Norepinephrine microinjections extracellular dopamine တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နျူကလိယအတွက် acetylcholine လျော့ accumbens: အားဖြည့်အစာကျွေးဖို့ဆက်စပ်မှု။ J ကို Neurochem ။ 1997; 68: 667-674 ။ [PubMed]
Hajnal တစ်ဦးက, Norgren R. နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကြီးထွားများပြားစေ sucrose မှဝင်ရောက်ခွင့်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ Neuroreport ။ 2002; 13: 2213-2216 ။ [PubMed]
Hajnal တစ်ဦးက, စမစ်မိသားစုဆရာဝန်, Norgren R. ခံတွင်း sucrose ဆွတိုးကြွက်များတွင် dopamine accumbens ။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2004; 286: R31-R37 ။ [PubMed]
Hajnal တစ်ဦးက, Szekely M က, Galosi R ကို, Lenard အဆိုအရအယ်လ် Accumbens cholinergic interneurons ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000; 70: 95-103 ။ [PubMed]
ပဲ့ Ka, Rada P ကို, Hoebel BG ။ acetylcholine တိုးပွားလာနေစဉ် hypothalamus ကန့်သတ်အတွက် serotonin နဲ့ပေါင်းစပ် Cholecystokinin dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens: တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ satiation ယန္တရား။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 963: 290-297 ။ [PubMed]
Henningfield je, Clayton R ကို, အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဆေးရွက်ကြီး၏တ်မှုန်ကူးဒဗလျူပါဝင်ပတ်သက်မှု။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1990; 85: 279-291 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988; 42: 1705-1712 ။ [PubMed]
ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အခြားအစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုစားသုံးခြင်း Heubner အိပ်ချ်နဲ့အတူ Endorphins ။ WW က Norton; နယူးယောက်: 1993 ။
Hoebel BG ။ ဦးနှောက်အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အတွက် neurotransmitters ။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 1985; 42: 1133-1150 ။ [PubMed]
Hoebel BG, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Schwartz DH, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Hunter GA ။ ဦးနှောက် norepinephrine, serotonin, နှင့်စားသုံးမိအပြုအမူစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရေး Microdialysis လေ့လာမှုများ: သီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ et al Schneider LH, အယ်ဒီတာများ in: ။ ။ အဆိုပါ Psychobiology လူ့စား၏ Disorders: Preclinical နှင့်လက်တွေ့ပတ်သ က်. ။ vol ။ 575 ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်; နယူးယောက်: 1989 ။ စစ။ 171-193 ။ [PubMed]
Hoebel BG, Leibowitz SF, anorexia နှင့် bulimia ၏ဟာနန်ဒက်ဇ်အယ်လ် Neurochemistry ။ ခုနှစ်တွင်: Anderson က H ကို, အယ်ဒီတာ။ ထိုပွဲကိုခံခြင်းနှင့်အစာခေါင်းပါးသော၏ဇီဝဗေဒ: မမှန်အစာစားခြင်းမှဆီလျော်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1992 ။ စစ။ 21-45 ။
Hoebel BG, Rada P ကို, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, အပြုအမူအားဖြည့်ခြင်းနှင့်တားစီးဘို့ Pothos အီးဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ: စားသက်ဆိုင်သော, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ။ et al Kahneman: D, အယ်ဒီတာများ in: ။ ။ သုခချမ်းသာ: Hedonic စိတ်ပညာ၏ Foundations ။ စယ် Sage ဖောင်ဒေးရှင်းမှ; နယူးယောက်: 1999 ။ စစ။ 558-572 ။
Holder CC ကို, Brooks-ဂွန် J ကို, Warren အမတ်။ စာပေပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပြန်လည်သုံးသပ်စားသုံးခြင်း၏ co-ရောဂါ။ int J ကို disorders စားပါ။ 1994; 16: 1-34 ။ [PubMed]
Howard BV, Wylie-rosette ဂျေသကြားနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ: အာဟာရအပေါ်ကောင်စီ၏အာဟာရ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်, American Heart Association ၏ဇီဝြဖစ်ပေါ်ကော်မတီထံမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်တစ်ဦးကကြေညာချက်။ စောင်ရေ။ 2002; 106: 523-527 ။ [PubMed]
Hubbell CL, Manx RF, ရိဒ် ld ။ မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးပိုပြီးအရက်ကိုမသောက်နှင့်အဆင့်မြင့်သောအသွေးအရက်ပြင်းအားအောင်မြင်ရန်ကြွက်စေပါတယ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1993; 17: 1040-1043 ။ [PubMed]
Hurd YL, Kehr J ကို, Ungerstedt U. မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစောင့်ကြည့်ဖို့ technique ကိုအဖြစ် Vivo microdialysis ခုနှစ်တွင်: ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ extracellular ကင်းအဆင့်ဆင့်၏ဆက်စပ်မှုနှင့် dopamine လျတ်။ J ကို Neurochem ။ 1988; 51: 1314-1316 ။ [PubMed]
Ito က R ကို, Dalley JW, Howes SR, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလီးယပ်အခြေအနေများ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Dissociation ကိုကင်းတွေကိုတုန့်ပြန်နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7489-7495 ။ [PubMed]
Itzhak Y ကိုမာတင် JL ။ ကြွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း, နီကိုတင်း, dizocipline နှင့်အရက်၏ဆိုးကျိုးများ: ကင်း-အရက်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive striatal dopamine Transporter binding ဆိုဒ်များ upregulation ပါဝငျသညျ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 818: 204-211 ။ [PubMed]
Jimerson, DC, Lesem MD, ကေးက WH, Brewerton TD ။ မကြာခဏမူးရူးဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ bulimic လူနာထံမှ cerebrospinal fluid အတွက်အနိမ့် serotonin နဲ့ dopamine metabolite ပြင်းအား။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 49: 132-138 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Striplin CD ကို, Steketee JD, Klitenick MA, Duffy P. ဆယ်လူလာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းယန္တရားများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992; 654: 128-135 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Weber ခဖက်တမင်းဆေးပြားဆေးထိုးသည့် ventral mesencephalon သို့ရံစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းမှကြွက်များ sensitizes ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1988; 245: 1095-1102 ။ [PubMed]
Kantak KM, Miczek Ka ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းကျူးကျော်: ဆုတ်ခွာ၏နည်းလမ်း၏ဆိုးကျိုးများ, တိုက်ပွဲများအတွေ့အကြုံ, နှင့်လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 1986; 90: 451-456 ။ [PubMed]
တစ်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏ကက်သရင်းအေခန္ဓာဗေဒ: compulsive စားကျော်လွှားရန်ထိရောက်သောပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Gurze စာအုပ်များ; Carlsbad: 1996 ။
Katz JL, Valentino RJ ။ မျောက်တွေကိုအတွက် opiate quasiwithdrawal syndrome ရောဂါ: cholinergic အေးဂျင့်များ၏ဆိုးကျိုးများမှ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာ၏နှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology (Berl) 1984; 84: 12-15 ။ [PubMed]
Kawasaki T က, Kashiwabara တစ်ဦးက, Sakai က T က, Igarashi ငွေကျပ်, Ogata N က, က Watanabe ကို H, Ichiyanagi K ကို Yamanouchi တီ long-term sucrose-အရက်သောက်အကြောင်းတရားများပုံမှန်အထီးကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဂလူးကို့စသည်းမခံတိုးတက်လာခဲ့သည်။ br J ကို Nutr ။ 2005; 93: 613-618 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Bakshi VP, Haber SN, Steininger TL, Will MJ, အ ventral striatum အတွင်းအရသာ hedonics ၏ Zhang ကအမ် Opioid မော်ဂျူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002; 76: 365-377 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Baldo BA, Pratt WE ။ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, arousal နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထား hypothalamic-thalamic-striatal ဝင်ရိုး။ J ကို comp Neurol ။ 2005; 493: 72-85 ။ [PubMed]
Klein DA, Boudreau GS, Devlin MJ, Walsh BT ။ အစာစားခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားအတုဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အသုံးပြုခြင်း။ int J ကို disorders စားပါ။ 2006; 39: 341-345 ။ [PubMed]
Koob gf, စွဲမှု၏က Le Moal အမ် Neurobiology ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; San Diego မှ: 2005 ။
Koob gf, Maldonado R ကို, opiate ဆုတ်ခွာ၏ Stinus အယ်လ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1992; 15: 186-191 ။ [PubMed]
လိုင်က S, lai H ကို, စာမျက်နှာ JB, McCoy သမဝါယမ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့။ J ကိုစွဲ dis ။ 2000; 19: 11-24 ။ [PubMed]
le Ka, fructose ၏ Tappy အယ်လ်အဲဒါတွေက Metabolic ဆိုးကျိုးများ။ Curr Opin Clin Nutr Metab စောင့်ရှောက်မှု။ 2006; 9: 469-475 ။ [PubMed]
le Magnen ဂျေအစားအစာဆုလာဘ်နှင့်အစားအစာစွဲလမ်းအတွက် opiates တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ခုနှစ်တွင်: Capaldi PT, အယ်ဒီတာ။ အရသာ, အတွေ့အကြုံများ, ကျွေးမွေး။ အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1990 ။ စစ။ 241-252 ။
Leibowitz SF, Hoebel BG ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ et al အသွင်ဆောင်လာကြောင်း, G, အယ်ဒီတာများ in: ။ ။ အဝလွန်ခြင်း၏လက်စွဲစာအုပ်။ Marcel Dekker; နယူးယောက်: 2004 ။ စစ။ 301-371 ။
Levine AS, Billington CJ ။ ဆုလာဘ်-related နို့တိုက်ကျွေးရေး၏အေးဂျင့်အဖြစ် Opioids: အသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 82: 57-61 ။ [PubMed]
Levine AS, Kotz CM, Gosnell BA ဘွဲ့။ sugars: hedonic ရှုထောင့်, neuroregulation, နှင့်စွမ်းအင်ဟန်ချက်။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 2003; 78: 834S-842S ။ [PubMed]
Liang NC, Hajnal တစ်ဦးက, Norgren R. Sham ပြောင်းဖူးရေနံတိုးအစာကျွေးကြွက်များတွင် dopamine accumbens ။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2006; 291: R1236-R1239 ။ [PubMed]
Liguori တစ်ဦးက, Hughes JR, Goldberg K ကိုယခင်ကင်း-မှီခိုလူသားများတွင်ခံတွင်းကဖိန်းဓာတ်၏ Callas P. Subject ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1997; 49: 17-24 ။ [PubMed]
Ludwig DS, Peterson Ke, Gortmaker SL ။ သကြား-ဒူအချိုရည်၏စားသုံးမှုနှင့်ကလေးဘဝအဝလွန်အကြားဆက်ဆံရေး: တစ်အလားအလာ, စူးစမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 505-508 ။ [PubMed]
မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Rada P ကို, Pothos အီး, Hoebel BG ။ acetylcholine နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ, striatum နှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူ၏ hippocampus အပေါ်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အရက်သောက်၏ဆိုးကျိုးများ။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 1992; 58: 2269-2274 ။ [PubMed]
မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Weinberg JB, Rada PV, Hoebel BG ။ Extracellular acetylcholine အနေနဲ့ဆန္ဒရှိအေးစက်အရသာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးလာသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 688: 184-188 ။ [PubMed]
Markou တစ်ဦးက, Weiss က F, ရွှေ LH ကာဣန SB, Schulteis, G, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ Psychopharmacology (Berl) 1993; 112: 163-182 ။ [PubMed]
Marrazzi MA, Luby ED ။ နာတာရှည် anorexia nervosa တစ်ခု Auto-စွဲ opioid မော်ဒယ်။ int J ကို disorders စားပါ။ 1986; 5: 191-208 ။
Marrazzi MA, Luby ED ။ anorexia nervosa ၏ neurobiology: တစ်ခု Auto-စွဲ? ခုနှစ်တွင်: Cohen ကို M က, Foa P ကို, အယ်ဒီတာများ။ တစ်ဦး endocrine အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အဆိုပါဦးနှောက်။ Springer-Verlag; နယူးယောက်: 1990 ။ စစ။ 46-95 ။
မာတင် WR ။ naltrexone နှင့်အတူဘိန်းဖြူမှီခို၏ဆက်ဆံမှု။ Curr Psychiatric Ther ။ 1975; 15: 157-161 ။ [PubMed]
မာတင် WR, Wikler တစ်ဦးက, Eades CG, Pescor FT ။ ရန်သည်းခံစိတ်နှင့်ကြွက်များအတွင်းမော်ဖင်းအကိုက်အပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူတည်။ Psychopharmacologia ။ 1963; 4: 247-260 ။ [PubMed]
McBride WJ, မာဖီ JM, ဦးနှောက်အားဖြည့်ယန္တယား၏ Ikemoto အက်စ် Localization: intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် intracranial ရာအရပျ-အေးစက်လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 101: 129-152 ။ [PubMed]
McSweeney FK, မာဖီ ES, Kowal ကို BP ။ ထိခိုက်စေလေ့တို့ကမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏စည်းမျဉ်း။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2005; 13: 163-184 ။ [PubMed]
မာ ME, Holder MD ။ စားနပ်ရိက္ခာမတရားသော, endogenous opioid peptides နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 1997; 29: 325-352 ။ [PubMed]
Mifsud JC, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ အတွက် Vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နျူကလိယ accumbens သို့ထုံမွှန်းနီကိုတင်း Synaptic dopamine တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 478: 365-367 ။ [PubMed]
Miller က RJ, Pickel VM က။ enkephalins ၏ Immunohistochemical ဖြန့်ဖြူး: catecholamines ပါဝင်သောစနစ်များနှင့်အတူ interaction က။ Adv ထဲကဓာတုပစ်စညျး Psychopharmacol ။ 1980; 25: 349-359 ။ [PubMed]
Mogenson GJ ယန် CR ။ limbic-မော်တာပေါင်းစည်းမှုနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှလှုံ့ဆျောမှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရန် Basal forebrain ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ Adv Exp Med Biol ။ 1991; 295: 267-290 ။ [PubMed]
Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 2000 အတွက်သေမင်း၏အမှန်တကယ်အကြောင်းတရားများ။ Jama ။ 2004; 291: 1238-1245 ။ [PubMed]
Moore က RJ, Vinsant SL, Nadar MA, Poorino LJ, Friedman DP ။ dopamine D ကိုအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု2 မျောက်တွေကိုအတွက် receptors ။ synapses ။ 1998; 30: 88-96 ။ [PubMed]
Mutschler နယူးဟမ်းရှား, Miczek Ka ။ တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သို့မဟုတ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းမူးရူးကနေဆုတ်ခွာ: ကြွက်များတွင် ultrasonic ဒုက္ခဆင်းရဲအသံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 1998; 136: 402-408 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် je, Pearson HW, Sayers M က, Glynn တီဂျေ, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသုတေသနဝေါဟာရရှင်းလင်းချက်ဖို့ကိုလမ်းညွှန်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, Rockville: 1982 ။
Nichols ML, Hubbell CL, Kalsher MJ, ရိဒ် ld ။ မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်ကြားတွင်ဘီယာစားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ အရက်။ 1991; 8: 237-240 ။ [PubMed]
Nisell M က, Nomikos GG, Svensson TH ။ ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စနစ်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနီကိုတင်း receptors နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ synapses ။ 1994; 16: 36-44 ။ [PubMed]
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: Nocjar ကို C, Panksepp ဂျေနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ကြွဆေး pretreatment drug- နှင့်သဘာ-အကျိုးသည်အနာဂတ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 128: 189-203 ။ [PubMed]
O 'Brien က CP, Childress AR, Ehrman R ကို, Robbins SJ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် conditioning အချက်များ: သူတို့မလှူရှင်းပြနိုင်မလဲ? J ကို Psychopharmacol ။ 1998; 12: 15-22 ။ [PubMed]
O 'Brien က CP, Testa T က, O' Brien တီဂျေ, Brady JP, ဝဲလ်ခလူသားတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာအေးစက်။ သိပ္ပံ။ 1977; 195: 1000-1002 ။ [PubMed]
ကြားရှိ ME ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်သက်ရောက်မှုအားဖြည့်။ ဦးနှောက် Res ။ 1982; 237: 429-440 ။ [PubMed]
ပန် Y ကို, Berman Y ကို, Haberny S က, Meller အီး, Carr က KD ။ ပေါင်းစပ်, ပရိုတိန်းအဆင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့် mesoaccumbens နှင့်နာတာရှည်အစာအာဟာရ-ကန့်သတ်ကြွက်၏ nigrostriatal dopamine လမ်းကြောင်းအတွက် tyrosine hydroxylase ၏ phosphorylation ပြည်နယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1122: 135-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pecina S က, Berridge KC ။ intraventricular မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်အရသာအပျြောအပါးဗဟိုတိုးမြှင့်။ Neurobiology (BP) 1995; 3: 269-280 ။ [PubMed]
Pellow S က, Chopin P ကို, အရှေ့တောင် File ပွင့်လင်း၏ Briley အမ်အတည်ပြုခြင်း: ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်မြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အတွက်လက်မောင်း entries တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 1985; 14: 149-167 ။ [PubMed]
Picciotto MR, Corrigall WA ။ နီကိုတင်းစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအခြေခံအာရုံခံစနစ်များ: အာရုံကြောဆားကစ်နှင့်မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3338-3341 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနျူကလီးယပ်အတွက်ဦးစားစက်ခေါင်းများနှင့် extracellular dopamine အတွက် sensitized တိုးထုတ်လုပ်အထပ်ထပ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ကြွက်များ၏အခွံ accumbens ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995; 275: 1019-1029 ။ [PubMed]
Pontieri FE, Monnazzi P ကို, Scontrini တစ်ဦးက, Buttarelli FR, Patacchioli FR ။ ကြွက်များတွင် cannabinoid pretreatment အားဖြင့်ဘိန်းဖြူမှအမူအကျင့်ာင်း။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2001; 421: R1-R3 ။ [PubMed]
Porsolt RD, Anton, G, Blavet N ကို, ကြွက်များတွင် Jalfre အမ်အပြုအမူစိတ်ပျက်လက်ပျက်: လက္ခဏာကုသမှုမှအထိခိုက်မခံတဲ့မော်ဒယ်သစ်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1978; 47: 379-391 ။ [PubMed]
Pothos အီး, Rada P ကို, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Hoebel BG ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine microdialysis စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်, naloxone-precipitated ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် clonidine ကုသမှုစဉ်အတွင်း accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 566: 348-350 ။ [PubMed]
Prasad BM, Ulibarri ကို C, Sorg BA ဘွဲ့။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကင်းမှ: ရကာလတိုပြီးနောက် adrenalectomy နှင့် corticosterone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရေရှည်ဆုတ်ခွာ။ Psychopharmacology (Berl) 1998; 136: 24-33 ။ [PubMed]
Przewlocka B, Turchan J ကို, Lason W က, Przewlocki R. နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ striatum အတွက် prodynorphin သည့်စနစ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ခုတည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience ။ 1996; 70: 749-754 ။ [PubMed]
Putnam J ကို, Allhouse je ။ အစားအသောက်စားသုံးမှု, စျေးနှုန်းများနှင့်အသုံးစရိတ်များ, 1970-1997 ။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စားသုံးသူစီးပွားရေးဌာနခွဲ, စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သုတေသနဝန်ဆောင်မှု, စိုက်ပျိုးရေးကိုအမေရိကန်ဦးစီးဌာန, ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1999 ။
Rada P ကို, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ Adicciónအယ်လ်azúcar: ¿ Mito O realidad? တည်းဖြတ်မူ။ ဗြာ Venez Endocrinol Metab ။ 2005a; 3: 2-12 ။
Rada P ကို, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ သကြားပေါ် Daily သတင်းစာ Bing အကြိမ်ကြိမ် accumbens shell ကိုအတွက် dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ neuroscience ။ 2005b; 134: 737-744 ။ [PubMed]
Rada P ကို, Colasante ကို C, Skirzewski M က, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, အရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် Hoebel ခအပြုအမူစိတ်ကျရောဂါ acetylcholinesterase နှင့် muscarinic-1 receptors နေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျော်ကြေးနှင့်အတူ accumbens acetylcholine လွှတ်ပေးရန်အတွက် biphasic, ကြာရှည်ပြောင်းလဲမှု, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ neuroscience ။ 2006; 141: 67-76 ။ [PubMed]
Rada P ကို, Hoebel BG ။ အဆိုပါ accumbens အတွက် Acetylcholine diazepam အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့် benzodiazepine ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်တိုးပွါး: မှီခိုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှယန္တရား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2005; 508: 131-138 ။ [PubMed]
Rada P ကို, Jensen K ကို Hoebel BG ။ ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine နဲ့ acetylcholine အပေါ်နီကိုတင်းနှင့် mecamylamine-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 157: 105-110 ။ [PubMed]
Rada P ကို, ဂျွန်ဆင် DF, Lewis က MJ, Hoebel BG ။ အရက်-ကုသကြွက်များတွင် naloxone extracellular dopamine လျော့ကျနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် acetylcholine တိုးပွါး: opioid ဆုတ်ခွာအထောက်အထား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 79: 599-605 ။ [PubMed]
Rada P ကို, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Hoebel BG ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် Galanin dopamine ပေါ်ပေါက်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် acetylcholine လွှတ်ပေးရေးကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ: နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏ hypothalamic စတင်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှယန္တရား။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 798: 1-6 ။ [PubMed]
Rada P ကို, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Pothos အီး, Hoebel BG ။ စနစ်မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ပြိုင်နက် extracellular acetylcholine လျော့ကျခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးပွားစေပါသည်။ Neuropharmacology ။ 1991a; 30: 1133-1136 ။ [PubMed]
Rada P ကို, Páez X ကို, ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Avena မိုင်, Hoebel BG ။ အပြုအမူအားဖြည့်ခြင်းနှင့်တားစီး၏လေ့လာမှုမှာ Microdialysis ။ ခုနှစ်တွင်: Westerink BH, Creamers T က, အယ်ဒီတာများ။ Microdialysis ၏လက်စွဲစာအုပ်: နည်းလမ်းများ, လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သ က်. ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2007 ။ စစ။ 351-375 ။
Rada P ကို, Pothos အီး, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Hoebel BG ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် acetylcholine မော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် clonidine နှင့်အတူ၎င်း၏ကုသမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း Microdialysis သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 1991b; 561: 354-356 ။ [PubMed]
Rada PV, Hoebel BG ။ နျူကလီးယပ်အတွက် extracellular acetylcholine အပေါ်ဃ-fenfluramine ပေါင်း phentermine ၏ Supraadditive အကျိုးသက်ရောက်မှု accumbens: အလွန်အကျွံနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏တားစီးဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယန္တရား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 65: 369-373 ။ [PubMed]
Rada PV, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, တေလာ KM, Hoebel BG ။ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone, ဒေသအလိုက် ip သို့မဟုတ်, အ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် extracellular acetylcholine အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1996; 53: 809-816 ။ [PubMed]
Rada PV, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Yeoman JJ, Hoebel BG ။ Acetylcholine hypothalamic Self-stimulation အားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဖြန့်ချိ, စားခြင်း, သောက်ခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 65: 375-379 ။ [PubMed]
Radhakishun FS, Korf J ကို, Venema K ကို Westerink BH ။ တွန်းဆွဲ perfusates အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်ကြွက် striatum ထံမှ endogenous dopamine နှင့်၎င်း၏ metabolites များလွှတ်ပေးရေး: စနစ်တကျအုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။ Pharm Weekbl သိပ္ပံ။ 1983; 5: 153-158 ။ [PubMed]
Riva, G, Bacchetta M က, Cesa, G, Conti S က, Castelnuovo, G, Mantovani က F, Molinari အီးစွဲနေတဲ့ပုံစံကိုအကြီးအကျယ်အဝလွန်ခြင်းလား? ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, လက်တွေ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်ထားလက်တွေ့စမ်းသပ်။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2006; 9: 457-479 ။ [PubMed]
Rolls ET ။ အရသာနှင့်အစာစားချင်စိတ်အခြေခံဦးနှောက်ယန္တရားများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2006; 361: 1123-1136 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rossetti ZL, Hmaidan Y ကို, Gessa GL ။ mesolimbic dopamine လွှတ်ရာသိသိသာသာတားစီး: ကြွက်များတွင်အီသနော, မော်ဖင်းအကိုက်, ကင်းများနှင့်စိတ်ကြွဆေး abstinence တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1992; 221: 227-234 ။ [PubMed]
ရုဖုအီးသကြား addction: သကြားစွဲလမ်းကျော်လွှားဖို့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်။ အဲလစ်ဇဘက်ဘရောင်းရုဖု; 2004 in: Bloomington ။
Saad MF, Khan ကတစ်ဦး, Sharma ကတစ်ဦးမိုက်ကယ် R ကို, Riad-ဂါဗြေလ MG, Boyadjian R ကို, Jinagouda SD, Steil GM က, Kamdar V. ဇီဝ insulinemia acute ပလာစမာ leptin modulates ။ ဆီးချိုရောဂါ။ 1998; 47: 544-549 ။ [PubMed]
Salamone JD ။ striatal နှင့် accumbens dopamine ၏ရှုပ်ထွေးသောမော်တာများနှင့် sensorimotor လုပ်ဆောင်ချက်များကို: ဆာပအပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 1992; 107: 160-174 ။ [PubMed]
Sato Y ကို, Ito က T က, Udaka N ကို, Kanisawa M က, Noguchi Y ကို, ဖြစ်သည်ဟု Cushman SW, ကြွက်ပန်ကရိယ islets အတွက် facilitated-ပျံ့နှံ့ဂလူးကို့စပို့ဆောင်ရေး Satoh အက်စ် Immunohistochemical localization ။ တစ်သျှူးဆဲလ်။ 1996; 28: 637-643 ။ [PubMed]
Schenk S က, နှင်းက S, Horger BA ဘွဲ့။ စိတ်ကြွဆေးမှ pre-ထိတွေ့သော်လည်းမနီကိုတင်းကိုကင်းများ၏မော်တာကိုသက်ဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှကြွက်များ sensitizes ။ Psychopharmacology (Berl) 1991; 103: 62-66 ။ [PubMed]
Schoffelmeer AN, Wardeh, G, Vanderschuren LJ ။ မော်ဖင်းအကိုက် acute နှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် nonvesicular ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန် attenuates ။ synapses ။ 2001; 42: 87-94 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Yackey M က, Risbrough V ကို, Koob gf ။ ဓါတ်လှေကားပေါင်း-ဝင်္အတွက်အလိုအလျောက်နှင့် naloxone-precipitated opiate ဆုတ်ခွာ၏ Anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1998; 60: 727-731 ။ [PubMed]
Schwartz မဂ္ဂါဝပ်, ဝုဒ် SC, port: D, Jr က Seeley RJ, Baskin DG ။ အစားအစာစားသုံးမှု၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ။ 2000; 404: 661-671 ။ [PubMed]
Sclafani တစ်ဦးက, Nissenbaum JW ။ အစာအိမ်အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးကိုတကယ်အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးလား? နံနက် J ကို Physiol ။ 1985; 248: R387-390 ။ [PubMed]
Shalev ဦး, Morales က M, မျှော်လင့်ခြင်း, B, Yap J ကို, ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူထံမှအောက်ပါဆုတ်ခွာရှာကြံသုဉ်းအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် Shaham Y. အချိန်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 156: 98-107 ။ [PubMed]
Smith ကမိသားစုဆရာဝန်။ နာတာရှည်, နောက်ပြန်လှည်အစာအိမ် fistula နှင့်အတူကြွက်များတွင်အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေး။ ခုနှစ်တွင်: ။ et al Crawley ဖြစ်မှု, အယ်ဒီတာများ။ Neruoscience အတွက်လက်ရှိ Protocols ။ vol ။ 8.6 ။ ယောဟနျသ Wiley နှင့်သား Inc မှ .; နယူးယောက်: 1998 ။ စစ။ D.1-D.6 ။
Smith က je, Co. , C, ယာဉ်ကြော JD ။ ကြွက်မော်ဖင်းအကိုက်-ရှာကြံအပြုအမူတွေဆက်နွယ်နေကြောင်း Limbic acetylcholine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1984; 20: 429-442 ။ [PubMed]
Spanagel R ကို, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် opioid peptides ၏သက်ရောက်မှု accumbens: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ J ကို Neurochem ။ 1990; 55: 1734-1740 ။ [PubMed]
Stein အယ်လ်ဦးနှောက်နဲ့အတူ Endorphins: အပျော်အပါးနှင့်ဆုလာဘ်၏ဖြစ်နိုင်သောပြုပြီ။ neuroscience Res အစီအစဉ် Bull ။ 1978; 16: 556-563 ။ [PubMed]
Stein L ကို, Belluzzi JD ။ ဦးနှောက်နဲ့အတူ Endorphins: ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ။ ဗဟိုဘဏ် proc ။ 1979; 38: 2468-2472 ။ [PubMed]
Tanda, G, Di Chiara G. အအလွဲသုံးစားမှု၏ကြွက် ventral အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (Fonzies) က shared tegmentum နှင့် Non-psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးက dopamine-mu1 opioid link ကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 1998; 10: 1179-1187 ။ [PubMed]
Teff KL, Elliott သည်အက်စ်အက်စ်, Tschop M က, Kieffer တီဂျေ, Rader: D, Heiman M က, Townsend RR, Keim NL, D'Alessio D ကို, ဟာဗဲလ် PJ ။ အစားအသောက် fructose, ပျံ့နှံ့နေတဲ့အင်ဆူလင်နှင့် leptin လျော့ကျစေပါတယ် ghrelin ၏ postprandial ဖိနှိပ်မှု attenuates, နှင့်အမျိုးသမီးများတွင် triglyceride တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2004; 89: 2963-2972 ။ [PubMed]
Toida S က, Takahashi က M, Shimizu H ကို, Sato N ကို, Shimomura Y ကို, ယောက်ျား Wistar ကြွက်များတွင်အဆီစုဆောင်းခြင်းအပေါ်မြင့်မားသော sucrose နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ Kobayashi ဗြဲ Effect ။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 1996; 4: 561-568 ။ [PubMed]
Turski WA, Czuczwar SJ, Turski L ကို, Sieklucka-Dziuba M က, Kleinrok Z. လေ့လာရေးစိုစွတ်သောခွေးများ၏ယန္တရားအပေါ်ကြွက်များတွင် carbachol ထုတ်လုပ်ချောက်ချားတော်မူ၏။ ဆေးဝါးဗေဒ။ 1984; 28: 112-120 ။ [PubMed]
Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ရိုင်ယန် JP, Schwartz JP ။ မော်ဖင်းအကိုက် preproenkephalin ဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 459: 391-397 ။ [PubMed]
Unterwald EM ။ ကိုကင်းများက opioid receptors ၏စည်းမျဉ်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001; 937: 74-92 ။ [PubMed]
Unterwald EM, ဟိုတစ်ဦးက, Rubenfeld JM, Kreek MJ ။ မူးရူးကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းတက်-စည်းမျဉ်းအမူအကျင့်ထိခိုက်စေ dopamine အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အချိန်သင်တန်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1994; 270: 1387-1396 ။ [PubMed]
Unterwald EM, Kreek MJ, Cuntapay အမ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုကိုကင်း-သွေးဆောင်အဲဒီ receptor ကိုပြောင်းလဲမှု၏ကြိမ်နှုန်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 900: 103-109 ။ [PubMed]
Vaccarino FJ, Bloom FE, Koob gf ။ နျူကလိယ၏ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူဆုလာဘ် attenuates opiate receptors accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 1985; 86: 37-42 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2005; 526: 77-88 ။ [PubMed]
midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 27 (8): 827-839 ။ [PubMed]
Vezina P ကို, Lorraine DS, အာနိုး GM က, Austin JD, midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကို၏ Suto N. အသိမြှစိတ်ကြွဆေး၏လိုက်စားအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 4654-4662 ။ [PubMed]
Vigano: D, Rubino T က, Di Chiara, G, Ascari ငါ Massi P ကို, Parolaro ဃ Mu opioid အဲဒီ receptor မော်ဖင်းအကိုက်ာင်းအတွက်အချက်ပြ။ neuroscience ။ 2003; 117: 921-929 ။ [PubMed]
Vilsboll T က, Krarup T က, Madsbad S က, Holst JJ ။ GLP-1 နှင့် GIP နှစ်ဦးစလုံး Basal နှင့် postprandial ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်မှာ insulinotropic ဖြစ်ကြပြီးကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်မုန့်ညက်၏ incretin အကျိုးသက်ရောက်မှုနီးပါးအညီအမျှကူညီသည်။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2003; 114: 115-121 ။ [PubMed]
Volkow ND, Ding YS, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ ကိုကင်းစွဲ: ပေနှင့်အတူပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာယူဆချက်။ J ကိုစွဲ dis ။ 1996a; 15: 55-71 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Hitzemann R ကို, Ding YS, Pappas N ကို, Shea ကို C, Piscani K. dopamine receptors အတွက်မဟုတ်အရက်သမားအတွက် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996b; 20: 1594-1598 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Childress AR, ဂြနျေး M က, Ma Y ကို, dorsal striatum အတွက် Wong က C. ကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 6583-6588 ။ [PubMed]
Volpicelli JR, Alterman AI အ, Hayashida M က, O 'Brien က CP ။ အရက်မှီခိုများ၏ကုသမှု Naltrexone ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 49: 876-880 ။ [PubMed]
Volpicelli JR, Ulm RR, Hopson N. အရက်ကာလအတွင်းကြွက်များတွင်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုးအောက်ပါ။ အရက်။ 1991; 8: 289-292 ။ [PubMed]
Waller DA, Kiser RS, Hardy BW, Fuchs ငါ Feigenbaum LP သို့ Uauy R. bulimia အတွက်အပြုအမူနှင့် plasma beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins စား။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 1986; 44: 20-23 ။ [PubMed]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu W က, Netusil N ကို, မုဆိုး JS ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 354-357 ။ [PubMed]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Telang က F, ဂြနျေး M က, Ma J ကို, Rao က M ကို, Zhu W က, Wong ကမှန် CT, Pappas ရော်ဘာ, Geliebter တစ်ဦးက, မုဆိုး JS ။ အစားအစာလှုံ့ဆော်မှု appetitive မှထိတွေ့မှုသိသိသာသာလူ့ဦးနှောက်ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuroimage ။ 2004a; 21: 1790-1797 ။ [PubMed]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Thanos PK, မုဆိုး JS ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအကြားတူညီ neurofunctional ပုံရိပ်တို့ကအကဲဖြတ်အဖြစ်: တစ် concept ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုစွဲ dis ။ 2004b; 23: 39-53 ။ [PubMed]
လမ်း EL, Loh သည်နာရီ, Shen FH ။ မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏တစ်ပြိုင်နက်အရေအတွက်အကဲဖြတ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1969; 167: 1-8 ။ [PubMed]
တဏှာ၏ Weiss အက်ဖ် Neurobiology, အေးစက်ဆုလာဘ်များနှင့် relapse ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2005; 5: 9-19 ။ [PubMed]
Westerink BH, Tuntler J ကို, Damsma, G, Rollema H ကို, က de Vries JB ။ ဦးနှောက် Dialysis နေဖြင့်လေ့လာခဲ့သတိကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-တိုးမြှင် dopamine လွှတ်ရာစရိုက်လက္ခဏာတွေအဘို့အ tetrodotoxin များအသုံးပြုမှု။ Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol ။ 1987; 336: 502-507 ။ [PubMed]
Wideman CH, Nadzam ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Murphy က HM ။ လူ့နျြးမာရေးအတှကျသကြားစွဲလမ်း, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်၏ဂယက်ရိုက်။ Nutr neuroscience ။ 2005; 8: 269-276 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ တဏှာ၏ neurobiology: စွဲ၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 1988; 97: 118-132 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Opiate ဆုလာဘ်: က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလွှာဟာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1989; 13: 129-133 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစားသုံးမိအပြုအမူအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 1997; 28: 1-5 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Bozarth MA ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: လေး circuit ကို element တွေကိုသိသာစီးရီးထဲမှာ "ကြိုး" ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1984; 12: 203-208 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, နယူတန် P ကို, Leeb K ကိုဘား B, Pocock: D, တရားမျှတမှု JB ။ , နျူကလိယအတွက် Jr အတက်အကျကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 1995; 120: 10-20 ။ [PubMed]
Yeoman JS ။ dopaminergic activation, antimuscarinic စိတ္တနှင့် schizophrenia အတွက် tegmental cholinergic အာရုံခံ၏အခန်းက္ပ။ Neuropsychopharmacology ။ 1995; 12: 3-16 ။ [PubMed]
Yoshimoto K ကို McBride WJ, Lumeng L ကိုလီ TK ။ အရက်ဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine နှင့် serotonin များလွှတ်ပေးရန်ကိုလှုံ့ဆျော။ အရက်။ 1992; 9: 17-22 ။ [PubMed]
Zangen တစ်ဦးက, Nakash R ကို, Overstreet DH, Yadid G. အအသင်းမှယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် serotonin-dopamine အပြန်အလှန်၏စိတ်ကျရောဂါအပြုအမူနှင့်မရှိခြင်းအကြား။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 155: 434-439 ။ [PubMed]
Zhang က M ကို, Gosnell BA, ကယ်လီ AE ။ High-အဆီအစားအစာစားသုံးမှုရွေးချယ်သည့်နျူကလိယ accumbens အတွင်း mu opioid အဲဒီ receptor ဆွနေဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 285: 908-914 ။ [PubMed]
Zhang က M ကို, ကယ်လီ AE ။ saccharin, ဆား, နှင့်အီသနောဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens သို့ mu opioid agonist ၏ပြုတ်ရည်တိုးနေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 159: 415-423 ။ [PubMed]
Zubieta JK, Gorelick DA, Stauffer R ကို, Ravert HT, Dannals RF, Frost က JJ ။ ကိုကင်း-မှီခိုလူပေအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ binding တိုးလာ mu opioid အဲဒီ receptor ကိုကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် Med ။ 1996; 2: 1225-1229 ။ [PubMed]